မုန့်ဟင်းခါး လွမ်းခြင်း – KZ’s မုန့်ဟင်းခါးဆိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မုန့်ဟင်းခါး လွမ်းခြင်း – KZ’s မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်
မုန့်ဟင်းခါး လွမ်းခြင်း – KZ’s မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်
Posted by ဇီဇီ on Dec 4, 2014 in Creative Writing, Food, Drink & Recipes, How To.., My Dear Diary | 86 comments
KZ's Diary KZ's ထမင်းဆိုင်
မုန့်ဟင်းခါး (သို့) မုန့်ဟင်းငါး ဆိုတဲ့ နာမည် ဘယ်ကဘယ်လို ရတယ်တော့ မသိ။
အာ့ ကိုယ့် အလုပ်လည်း မဟုတ်။
အရေးကြီးတာက အင်မတန်ကြိုက်သော နေ့တိုင်းစားနိုင်သော အစားအသောက်ဖြစ်နေခြင်းးး
(မုန့်ဟင်းခါးအလှည့်ဆိုတော့ ဂလိုပဲ ပြောရမှာပေါ့။ နောက် အစားအသောက်အလှည့်ကျ တစ်မျိုး ပြန်ပြောရမှာပေါ့နော့)
မွင်းငါး လို့ ခေါ်ရတာ အားသန်လို့ ဂလိုပဲ ရေးမယ်နော်။
အဘိုးက ဒေးဒရဲ ကျိုက်လတ်ဆက် ဆိုတော့ မွင်းငါး ကို အင်မတန်ချေးများတယ်၊
ငါးနည်းတယ်တို့၊ ငံပြာရည်မကောင်းဘူးတို့ စသည်ဖြင့်ပေါ့။
အဲ!! မွင်းငါးချက်ရင်လည်း ငါးအသားနွှင်ပြီး စပါးလင်ငရုပ်သီးအကြမ်းဖတ်ထောင်းနဲ့ ငါးမွှေစပ်စပ်လေး ချက်ပေးရသေးတယ်။
ပြီးမှ မွင်းငါးကို ငါးမွှေပါ ထည့်စားတယ်။
ငှက်ပျောအူလည်း နုနေမှ၊ ကြက်သွန်ဥ အရွယ်တော်ပေါလောပေါ်မှာ ကြိုက်တာ ဆိုတော့ ပျော်မသွားအောင် အနေတော်မှာ ဆယ်ပြီး သူ စားမှ ဟင်းရည်ထဲ ထည့်ပေးရတာ။
ဘဲဥ အလုံးလိုက်ပြုတ် အခွံခွါပြီး အပ်လေးတွေနဲ့ ဖောက်ရသေးးး
ပြီးမှ မွင်းငါးနဲ့ ထည့်ချက်တော့ အိုးဘဲဥထဲ ဟင်းရည်ဝင်ပြီး အဲဒီ ဘဲဥ အလုံးလိုက် မြင်ရမှာ စားသဗျားးး
ဆိုတော့ … အစားနဲ့ ပတ်သက်ရင် အဲဒီလို အဆာကျယ်တဲ့ အဖိုးရဲ့ အချစ်ဆုံး မြေးမို့ မွင်းငါးကို နည်းနည်းချေးများပါတယ်။၊.
ချက်နည်းကို ချေးများတာ မဟုတ်ဘူးးး (ကိုယ်လည်း မချက်တတ်ဘူးကိုးးး)
အရသာကောင်းမှရယ် အစာပလာရယ် စုံမှ ဆိုတာမျိုးးးးး၊
အာ့ကြောင့် အဲဒီ ရသတဏှာအတွက် ပင်ပန်းလိုက်တဲ့ အမျိုးဆိုတာတော့။ ဟိ။
မုန့်ဖတ် ဆို ၂ မျိုးပါရမှ…
ညှပ်ပြားဖတ်ရယ်။ (အကြောင်းသိတွေ မွင်းငါးစားဖိတ်ရင် ကိုယ့်အတွက် ဆန်ပြားသပ်သပ်ချန်ပေးတယ်)
ငါးမွှေလေး တစ်ပန်းကန်ရယ်၊ နည်းနည်းပါ။ (ကိုယ့် တစ်ယောက်စာ ရရင် အိုကေပါတယ်)
ကြက်သွန်ဖြူဆီချက်လေး စိတ်ပါရင်ချက်ထားတယ်၊ စိတ်ပါရင် စားလို့ရအောင်။ ဟိ။
ဘာလို့ဆို ခါတလေ မုန့်ဖတ်ကို သုပ်ပြီး မုန့်ဟင်းခါး ရည်နဲ့ စားလိုစား လုပ်သေးတာကိုးးး
အကြော်ဆို ပဲကပ်ကြော်ရယ်၊ ဘူးသီးကြော်ရယ်၊ မတ်ပဲ ကြော်ရယ် ကြိုက်ပါတယ်။ တစ်ခါ စားရင် တစ်ပွဲကို တစ်မျိုးထည့်စားတာမို့ပါ။ အဟေးဟေးဟေးးး
ရရင်လည်း အီကြာကွေးလေးပါ ပါ ရင် မဆိုးပါဘူးနော်။ (ကိုကိုကျောက်နဲ့ အကြိုက်တူ)
အချဉ်အတွက်ကျ သံပရိုသီး အဝါပေးရင် အင်မတန်မုန်းပြီး သံပုရာ သီး အစစ် ဒါမှ မဟုတ် ရှောက်သီးအသေးနဲ့မှ စားပါတယ်။
အစပ်အတွက် အလှော်မှုန့်ကို အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပြီး မရှိမှ အကြော်မှုန့်နဲ့ စားပါတယ်။ ဟိ။ (အခြောက်တောင့်ကို အိမ်မှာ ကြော်ပြီး ထောင်းထားတာမျိုးဟာ)
ငါး ငံပြာရည် အစစ်ထည့်စားတာကိုပဲ ကြိုက်ပါတယ်။ အဟိ။ (ငန်ပြီး ရော ဆို ဆား လာမပေးနဲ့၊ အော်ငိုမှာ။)
နံနံပင် ကြက်သွန်နီမိတ် ပါလေကာနဲ့ ကြိုက်ပါတယ်။ ဟိ။
ကိုယ်က အိုးဘဲဥထက် ကြက်ဥပြုတ်ကို ပါးပါးလှီးပြီး ထည့်စားတာပိုကြိုက်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ငါးဖယ်ကို တစ်ခါတည်းထည့်ချက်တာထက် ကြော်ပြီးမှ ပါးပါးလှီးထည့်တာ ပိုကြိုက်တယ်။
တစ်ချို့ရှိတယ်၊ တစ်ခါတည်း အိုးထဲ ငါးဖယ်တို့ ကြက်ဥတို့ ဖောက်ထည့်ပြိ ပွါးသလိုမျိုးကို ကြိုက်ဘူးးး၊ ညာမကျွေးနဲ့လို့ ပြောတာ။ အဒေါ်တွေ ခေါင်းခေါက်တာလည်း မမှတ်ဘူးး။
ပဲကပ်ကြော်နဲ့ အီကြာလေး နည်းနည်းစီထည့်
ကြက်သွန်ဖြူဆီချက် မွှေးမွှေးလေးကို ဆမ်းးး
နံနံပင်ကြက်သွန်မိတ်ပေါ်က နေ သံပုရာအစစ်ရည်လေး ညှစ်လိုက်ရင် ထွက်လာတဲ့ မုန့်ဟင်းခါးနံ့၊
အဲဒီ တစ်ပန်းကန်ကို စိုင်းစိုင်းနဲ့ မလဲနိုင်ပါဘူးးး
စားပြီး မှ ပဲ ပြန်ချော့တော့မယ်။
မန်းလေးမှာတုန်းကများဆို ဘယ် မုန့်ဟင်းခါး ဘယ်နား ကောင်းတယ်ဆို ဘယ်လောက် ဝေးဝေးသွားစားရတာ။
ဈေးချိုနားကနေ အရှေ့ပြင် ရွှေလက်ရာကို မနက်တိုင်း သွားရတာ လွယ်တယ်ထင်သလား မိတ်ဆွေ။
ထားပါ။ လွမ်းခြင်းက ရှည်နေပြီ။
အမှန်က မုန့်ဟင်းငါး ချက်နည်း စုထားချင်လို့ ရေးရတဲ့ လွမ်းခြင်းပါ။
တောင်ငူ မုန့်ဟင်းငါး စသည်ဖြင့်ပေါ့။ အမျိုးမျိုးရှိလို့။
ချက်နည်း အမျိုးမျိုးရှိသလို စားနည်းလည်း အမျိုးမျိုးရှိမှာပါ။
ဆိုတော့ သိတဲ့ နည်းတွေ ဝင်ပြောလို့ရပါတယ်။
ခု ပို့(စ) မှာတော့ မမှီရယ်၊ ဝေရယ်၊ ကျောက်ရယ်၊ မွသဲ ရယ် ဝင်ချက်ပေးထားပါတယ်။
မမှီ ပို့(စ) က နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ နေသူတွေ မုန့်ဟင်းငါး လွမ်းရင် အလွယ်တကူချက်စားဖို့ အင်မတန်သင့်တော်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူ၊ပြည်သားတိုင်း ဘယ်နေရာပဲ ရောက်ရောက် တမ်းတမ်းတတ စားချင်တာကတော့ မုန့်ဟင်းခါးပါ။ ပြည်တွင်းမှာနေတဲ့သူတွေ ပြည်ပရောက်နေသော်လည်း မြန်မာလူမျိုးခပ်များများ ရှိတဲ့နေရာမှာရောက်နေသူတွေ အတွက်တော့ စားချင်ရင် ၀ယ်စားလို့ရပေမဲ့ ကို့လူမျိုးနဲပြီး ၀ယ်စားချင်ရင်တောင် ၀ယ်စားလို့မရတဲ့သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ရေးလိုက်တာပါ။ တခါတလေ စားချင်တဲ့ စိတ်ဟာခြိုးနှိမ်လို့မရအောင် အခံရခက်လှပါတယ်။ ဒီစာကိုဖတ်ပြီး တယောက်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေမယ်ဆို ၀မ်းသာမိမှာပါ။
၂၊ဆန်လှော်မှုန်. (သူကတော့မလွယ်ပါဘူး။ ဒယ်အိုးထဲကို ဆန်တခွက်( ထမင်းပေါင်းအိုး ဆန်ချိန်ခွက်) ထည့်ပြီးလှော်ပါ။ နီလာပြီဆိုရင်ရပါပြီ။ လှော်ထားတဲ့ဆန်ကို blender နဲ.ကျိတ်လိုက်ပါ။ မှုန့်ပြီဆိုရင် ဗူးတဗူးနဲ့ထည့်ထားပါ။ )
၃၊ငါးခပ်များများကို အိုးထဲမှာ ပုစွန်ငါးပိနဲနဲ၊ နနွင်းမှုန်.နဲနဲ၊ စပါးလင်(အရှေ့တိုင်းအစားအစာဆိုင်မှာ ၀ယ်လို့ရပါတယ်။)၊ ငံပြာရည်များများ ထည့်ပြီးပြုတ်ပါ။ ငါးပြုတ်အိုးရပြီဆိုရင် အသားနွှင်ပါ။ ကြက်သွန်ဖြူများများ ဒါမှငါးညှီနံပျောက်မှာပါ။ ဂျင်း၊ ငါးပြုတ်ထဲကစပါးလင်ကို ပါးပါးလှီးပြီးမှ ထောင်းပါ။ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်း၊ စပါးလင် ထောင်းထားတာကိုဆီသတ်ပါ။ ရွှေရောင်သန်းလာပြီး မွှေးလာရင် အသားနွှင်ထားတဲ့ငါးတွေထည့်ပြီး ဆီသတ်ပါ။ ငါးလည်းဆီသတ်ပြီးပြီဆိုရင် မုန်.ဟင်းခါး စချက်ပါမယ်။
ချက်မည်.အိုးထဲကို ပဲစိမ်းမှုန်. စားပွဲတင်ဇွန်း တဇွန်းခွဲ၊ ဆန်လှော်မှုန်.သုံးဇွန်း ထည့်ပြီးရေနဲနဲထည့် ပြီး ပဲစိမ်းမှုန်ပျော်အောင်ဖျော်ပေးပါ။ ရေအေးနဲ.ဖျော်ပါ။ အခဲလေးတွေပျော်သွားရင် ငါးဆီသတ် ငါးဇွန်းထည့်ပါ ရေများများထည့် ငံပြာရည် ထပ်ထည့်ပြီး မီးဖိုပေါ်တင်ပြီး စချက်ပါ။ ဟင်းရည်ပွက်လာတဲ့အခါ ကြက်သွန်နီ ကိုလေးစိပ်စိပ်ပြီးထည့်ပါ။ များများကြိုက်ရင် များများထည့်ပါ။ ကြက်ဥကို အလုံးလိုက်ရေဆေးပြီး ဟင်းရည်အိုးထဲ ထည့်ပြုတ်ပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ သုံးလုံးလောက်ထည်.ပါတယ်။ မိနစ် ၂၀လောက်ကြာရင် ပြန်ဆယ်ပြီး အခွံသင် ပါးပါးလှီးပြီးအိုးထဲပြန်ထည်.ပါ။ ဟင်းအိုးကို မီးအေးအေးနဲ့ ကြာကြာလေး တည်ပါ။ ဟင်းရည်လည်း အရည်ကအနေတော်ဖြစ်ရင် မြည်းကြည့်ပါ အပေါ့အငံမြည်း လိုရင်ထပ်ထည့်ပြီးရင် မုန်.ဟင်းခါးဟင်းရည်ရပါပြီ။
အာရှဆိုင်က၀ယ်ထားတဲ့ Tomoshiraga somen က မုန့်ဟင်းခါးဖတ်နဲ့ တူပါတယ်။ သူ.ကိုပြုတ်ပြီး ရေအေးထဲထည့်ပြီး ရေစစ်ထားပါ။ နံနံပင်ရျိ၇င် ပါးပါးလှီးထားပါ။
ပန်းကန်ထဲ မုန်.ဖတ်ထည်. နံနံပင်၊ ငရုပ်သီးမှုန်.၊ သံပုရာရည်ထည်.ပြီး ဟင်းရည်ထည်.ပြီး စားလို့ရပါပြီ။ အရသာရှိတဲ့ မြန်မာမုန့်ဟင်းခါးတခွက် ကိုလွယ်လွယ်စားလို့ရပါပြီ။
ငါးဆီသတ်ထားတာတွေကို ဗူးလွတ်တဗူးထဲထည့်ပြီး ရေခဲသေတာထဲမှာ ခဲထားပါ။ နောက်တခါချက်စားတဲ့အခါ အလွယ်တကူချက်စားလို့ရပါတယ်။ ဆန်လှော်မှုန်.ကိုလည်းဗူးထဲထည့်ပြီး သိမ်းထားပါ။ ပဲစိမ်းမှုန်.လည်းသိမ်းထားပါ။ နောက်နေ့တွေစားချင်တဲ့အခါ အားလုံးအသင့်ရှိနေတဲ.အတွက် အပေါ်ကချက်နည်းအတိုင်း လွယ်လွယ်ချက်စားလို့ ရပါပြီ။ ငှက်ပျောအူကတော့ ရဖို.မလွယ်လို့ထည့်မရေးတာပါ။
ငှက်ပျောအူရရင်တော့ အခွံခွာ ပါးပါးလှီးပြီး နနွင်းထည့်ထားတဲ့ရေထဲ ထည်.ပြီးခဏစိမ်ထားပါ။ ဟင်းရည်ပွက်ပွက်ဆူရင် ထည့်လို့ရပါပြီ။ တချို.ငှက်ပျောအူက ခါးတတ်လို့ ပြုတ်ပြီးမှ ပြန်ထည့် တာလည်းတွေ့ဖူးပါတယ်။
မြန်မာမုန်.ဟင်းခါးစစ်စစ် နဲ.ကွဲလွဲတယ် ဆိုရင်လည်း အလွမ်းပြေ စားနိုင်စေဖို့ ရည်ရွယ်တာပါ။
ဝေ့ နည်းက မုန့်ဟင်းခါး တောချက်တဲ့။ ကြားတာနဲ့ စားချင်လာလို့။ဟိ။
မုန့်ဟင်းခါးတောချက် Easy cook- weiwei
မုန့်ဟင်းခါးကို ကျွန်မတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ နှစ်သက်စွာစားသုံးကြပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးနေ့စဉ်စားသုံးနေကျ အစားအစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နေရာဒေသအလိုက် ချက်ပြုတ်ပုံချင်း မတူကြပေမယ့် နှစ်သက်စွာစားသုံးတာကတော့ အတူတူပါပဲ။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာ ငါးပေါလို့ မုန့်ဟင်းခါးကို ငါးများများနဲ့ချက်ကြပါတယ်။ အညာဘက်မှာတော့ ပဲတွေ မြေပဲတွေကို များများထည့်ပြီး အစိမ့်အရသာပိုထွက်အောင်ချက်ကြပါတယ်။ နေပြည်တော်ဘက်မှာ မုန့်ဟင်းခါးထဲ ကြက်သားကိုတောင် ထည့်ချက်ကြတယ်။ ရန်ကုန်မှာကတော့ နံမည်စုံနဲ့ လက်ရာစုံ ချက်ရောင်းကြပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာ အချိန်မရွေးဝယ်စားလို့ရလို့ သိပ်မသာပေမယ့် နိုင်ငံခြားမှာ ကြာကြာနေလိုက်ရင်တော့ မုန့်ဟင်းခါးကို သတိရတောင့်တကြတယ်။ ရယ်ဒီမိတ်တွေကို ချက်စားကြပေမယ့် လတ်ဆတ်တဲ့မုန့်ဟင်းခါးလောက်တော့ စားလို့မကောင်းပါဘူး။
ကျွန်မကတော့ အစားအစာကို ကိုယ်တိုင်ပဲ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းချက်ရတာကို ၀ါသနာပါတယ်။ ရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက် အရသာတွေ အနံ့တွေစုံနေအောင်ထည့်ချက်တာကို မကြိုက်တာနဲ့ စားချင်စိတ်ပေါက်လာရင် ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ ချက်စားလေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်မချက်လေ့ရှိတဲ့ အလွယ်နည်းလမ်းကတော့ မုန့်ဟင်းခါးတစ်ပိသာအတွက် ….
ငါးခူ ………. ၂၅ ကျပ်သား
ဆန်မှုန့်အကျက်မှုန့် ….. ၇ ကျပ်ခွဲသား
ဂျင်း၊ စပါးလင်၊ ကြက်သွန်ဖြူ …. ပုံတွင်ပြထားသည့်ပမာဏခန့်
ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်ဥ ….. ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း
ဗမာငံပြာရည် ….. ၅ ကျပ်သားခန့်
ငရုတ်ကောင်းမှုန့် …. လိုအပ်သလောက်
ငါးခူကို ဆား ဆနွင်းနယ်ပြီးနောက် စပါးလင် အကြမ်း၊ ဂျင်း၊ ဗမာငံပြာရည်တို့ဖြင့် ၁၅ မိနစ်ခန့် ပြုတ်ပါတယ်။
ငါးပြုတ်နေစဉ်အတွင်း တခြားအိုးတစ်လုံးဖြင့် ရေပွက်ပွက်ဆူအောင်တည်ထားပါတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်း၊ စပါးလင်ကို ထောင်းထားလိုက်ပါတယ်။
ငါးပြုတ်ကျက်တာနဲ့ ငါးအသားနွှင်ပြီးနောက် ဆီသတ်ပါတယ်။ ဆီသတ်သည့်အခါ ဆီလိုသလောက်ထည့်ပြီး ဆီပူတဲ့အခါ ထောင်းထားတဲ့ ဂျင်း၊ စပါးလင်နဲ့ ကြက်သွန်ဖြူကို ထည့်ပြီး စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ဆီသတ်ပါတယ်။ ဆနွင်းမှုန့်အနဲငယ်ထည့်ပါသေးတယ်။ အဲဒီနောက် ငါးအသားနွှင်ထားတာထည့်ပြီး ငံပြာရည်အနဲငယ်ထပ်ထည့်ပြီး မီးအေးအေးနဲ့ ခပ်ခြောက်ခြောက်ဖြစ်လာသည်အထိ စိတ်ရှည်ရှည်ဆီသတ်လိုက်ပါတယ်။
တစ်ချိန်ထဲမှာပဲ ဆူနေတဲ့ရေနွေးအိုးထဲကို ဆန်မှုန့်အကျက်မှုန့်ထည့်ပြီး ပွက်ပွက်ဆူနေအောင် တည်ထားပါတယ်။ ဆီသတ်ပြီးတဲ့နောက် ဆန်မှုန့်တည်ထားတဲ့အိုးထဲကိုထည့်လိုက်ပါတယ်။ ငါးပြုတ်ထားတဲ့အရည်ကျန်နေတာတွေကိုလဲ လောင်းထည့်လိုက်တယ်။ ခဏကြာတော့ ကြက်သွန်နီနဲ့ ကြက်ဥပြုတ်လှီးထားတာတွေကို ထည့်တယ်။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်ထည့်ပါတယ်။ အပေါ့အငံအတွက် မြည်းပြီးရင် စားလို့ရပါပြီ။
ငှက်ပျောအူ အဆင်ပြေရင် ထည့်လို့ရပါတယ် … ကျွန်မက အလွယ်ပဲချက်စားတာဆိုတော့ စားလို့ဖြစ်ရုံပဲလုပ်လေ့ရှိပါတယ် … ငရုတ်သီးမကြိုက်လို့ ငရုတ်ကောင်းသုံးချက်တဲ့ ကျွန်မချက်တဲ့နည်းလမ်းမျိုးကို ရန်ကုန်မှာတော့ တောချက်မုန့်ဟင်းခါးလို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ စုစုပေါင်း အချိန် တစ်နာရီလောက်ကုန်ပြီး မိသားစု ၅ ယောက်စာအတွက် မိုးအေးအေးမှာ စားမြိန်ဖွယ်ရာ ညနေစာလေးတစ်ခု ဖြစ်သွားပါတော့တယ် …
တောင်ငူ မုန့်ဟင်းခါးကတော့ ဆာကူရာ ဘလော့ကနေယူလိုက်ပါတယ်။ အပြင်မှာ တစ်ခါပဲ စားဖူးတယ်။ ကောင်းတာပဲရယ်။
တောင်ငူမုန့်​ဟင်းခါးရော စားဖူးလား – ဆာကူရာ
တောင်ငူမုန့်ဟင်းခါး ချက်ဖို့ ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ ဆန်လှော်မှုန့်၊ ပဲသီး၊ နံနံပင်၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ငါးခူ၊ စပါးလင်၊ ဂျင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူနီ၊ မုန့်ဟင်းခါးဖတ်၊ ပြီးတော့ မုန့်ဟင်းခါးနဲ့တွဲစားဖို့ အကြော်ပါရင် ပိုစားကောင်းပါတယ်။
ဒီမှာတော့ ပဲကြော်က ၀ယ်မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် မုန့်ဟင်းခါးချက်စားဖြစ်ရင် ပဲကြော်နဲ့ မစားရတာ များပါတယ်။
မုန့်ဟင်းခါး ဟင်းရည်ချက်ဖို့အတွက် ပထမဆုံး ငါးခူကို ငံပြာရည် နည်းနည်းထည့်ပြီး ပြုတ်ပါတယ်။ ငါးခူမရလည်း ငါးကျီးပေါ့။
ငါးက လတ်ဆတ်ရင် ဟင်းရည် ပိုချိုပါတယ်။ ငါးပြုတ်ထားတုန်း ကြက်သွန်ဖြူကို ဆီချက် ချက်ထားပါတယ်။
ငါးနူးပြီဆို အသားနွှင်ထားပါတယ်။ တလက်စတည်း ငါးအရိုးတွေကိုပါ ထောင်း၊ ထွက်လာတဲ့အရည်ကို ငါးပြုတ်ရည်ထဲကို အရိုးမပါအောင် ဇကာနဲ့စစ်ပြီး ရောထည့်လိုက်တယ်။
ပြီးမှ အနံ့မွှေးအောင် စပါးလင်အရိုးထောင်းထားတာ ထည့်ပြီး ဆူအောင် တည်ထားလိုက်ပါတယ်။ ငါးဆီသတ်ဖို့အတွက်ကတော့ ဆီဆူရင် ဆနွင်းနည်းနည်းထည့်ပြီးမှ ကြက်သွန်အဖြူ၊ဂျင်း၊ စပါးလင်ထောင်းထားတာနဲ့ ရိုးရိုးမုန့်ဟင်းခါး ချက်သလိုပဲ ဆီသတ်ပါတယ်။ ငရုတ်သီး အရောင်တင်မှုန့် မသုံးပါဘူး။ ဟင်းရည်ဆူပြီဆို ငါးဆီသတ်ထားတာရယ် ကြက်သွန်နီ များများကို ပါးပါးလှီးထည့်ပြီး မီးအေးအေးနဲ့ ဆူအောင် တည်ထားလိုက်တာပေါ့။ ငှက်ပျောအူရှိရင်လည်း ထည့်လို့ရပါတယ်။ ဟင်းရည်ဆူပြီး အပေ့ါအငန်လိုသလောက်မြည်းပြီးရင် မုန့်ဟင်းခါး ဟင်းရည်ကျဲ ရပါပြီ။
ဟင်းရည်ပြီးတာနဲ့ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ပဲသီး၊ နံနံပင်၊ သံပုရာသီးကို လှီးပြီး ပြင်ထားပါတယ်။
ဆန်လှော်မှုန့်၊ ပဲကြော်၊ ငံပြာရည် စတာတွေကိုလည်း အရံသင့်ပြင် ထားပါတယ်။
အသုပ် ကြိုက်တတ်တဲ့ သူအတွက် မုန့်ဖတ်ရယ်၊ ဆီချက်ချက်ထားတာရယ်၊ ဆန်လှော်မှုန့်ရယ်၊ ငရုတ်သီးအကျက်မှုန့်၊ နံနံပင်၊ ပဲသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး နဲ့ နောက်ဆုံး နယ်လို့ ကောင်းယုံ မုန့်ဟင်းရည် ထည့်ပြီး နယ်ပေးပါတယ်။
အချဉ်ကြိုက်ရင် သံပုရာရည်ညစ်ထည့်ပေါ့။ အပေါ့အငန် စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီ ဆိုရင် ပဲကြော်ထည့်ပြီး စားလို့ရပါပြီ။ အသုပ်မကြိုက်တဲ့ သူတွေကတော့ မုန့်ဟင်းခါးဖတ်၊ ဟင်းရည်ကျဲ များများဆမ်းပြီး ဆန်လှော်မှုန့်၊ နံနံပင်၊ ပဲသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ အချဉ်ညစ်ပြီး စားလို့ရပါတယ်။ ဒါကတော့ တောင်ငူမုန့်ဟင်းခါး ချက်နည်းပါ။ အိမ်မှာ ချက်စားဖြစ်ရင်တော့ ကျမက ၂ မျိုးလုံး ကြိုက်တယ်။ သူကတော့ အသုပ်ကို မုန့်ဟင်းရည်သောက်ပြီး စားတာကို ပိုသဘောကျပါတယ်။
တကယ်လို့သာ တောင်ငူကို ရောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် တောင်ငူမုန့်ဟင်းခါးကို စားကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
“တောင်ငူမုန့်ဟင်းခါး ဘယ်လိုချက်? ” လို့ မေးထားတဲ့ ညီမလေး ခိုင်ဇာနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ “မျှော်သာ မျှော်သည်” ပို့စ်မှာ comment ရေးသွားတဲ့ စာဖတ်သူတို့ ဒီပို့စ်လေး ဖတ်ပြီး ကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
ခု လက်စွမ်းပြမှာကတော့ မွန်နုထွားကို ဟောင်ကောင်ကျွန်းသို့အပါ ခေါ်ဆောင်နိုင်သော ကိုကိုကျောက်ရဲ့ မော်လမြိုင်မုန့်ဟင်းငါး လက်ရာပါ။
ဟိဟိ။ ကိုယ်ကတော့ ဘာလိုလို ကိုကိုကျောက်ဆီက နှိုက်တယ်။ ဟင်းချက်နည်းပြောတာ။ ဟိ။
မော်လမြိုင် မုန့်ဟင်းခါး… – ဦးကျောက်ခဲ
ငါးရွှေ ဒါမှမဟုတ် ငါးခူ (ဘာမှမရှိရင် NTUC က Sea Bass နဲ့ သမ ) ကို အချွဲ စင်အောင် သေချာဆေးပြီး ခေါင်းဖြတ် ၊ ဗိုက်ခွဲ ကလီစာတွေထုတ် ၊ ရေထပ်ဆေးပြီး စစ်ထားပါ ။
ရေစစ်သွားရင် ငါးကို ဆား ၊ နနွင်း ၊ ငါးပိစိမ်းစားအနည်းငယ်တို့နဲ့ နယ်ပြီး နာရီဝက်လောက် နှပ်ထားပါ ။
စပါးလင် ၄- ပင်ကို ရေဆေး ၊ အဖျားပိုင်းကိုဖြတ် ၊ ငရုပ်ကျည်ပွေ့နဲ့ ကြေမထွက်အောင် ခပ်ဖွဖွထုပြီး ထုံးထားပါ ။
မီးဖိုပေါ်မှာ မီးပုံမှန်နဲ့ပဲ ငါးမြုပ်ရုံလောက် ရေကို မှန်းထည့်ပြီး ရေနွေး ဆူအောင် တည်ပါ။
ရေဆူလျင် နှပ်ထားတဲ့ငါး ၊ စပါးလင်၊ ငံပြာရည်အနည်းငယ် ထည့်ပြီး ကျက်အောင်ပြုတ်ပါ ။
ငါးကျက်ပြီဆိုလျင် ပြုတ်ရည်ထဲကနေ ငါးဖတ်ကိုဆယ်ပြီး အအေးခံထားပါ ။
အေးသွားလျင် အသားနွင်ထားပါ ။
ငှက်ပျောအူကို အပြင်ခွံတွေ အမျှင်တွေ သင်ပြီး ခပ်ပါးပါးလှီးပေးပါ ။
ပြီးရင် အိုးတစ်လုံးထဲ ရေထည့်၊ နနွင်းမှုန့်ထည့် ၊ ဆားထည့် ၊ ပြီးရင် လှီးထားတဲ့ ငှက်ပျောအူတွေကို ထည့်ပြီး ၁၀-မိနစ်လောက် စိမ်ထားပါ ။
ပြီးရင် အဲသည့်အိုးကို ပွက်ပွက်ဆူအောင်တည် ၊ ဆူလာရင် အဲသည့် နနွင်းရေတွေကို သွန်ပစ် ၊ နောက်ထပ် ရေအသစ်ထပ်ထည့်ပြီး ငှက်ပျောအူတွေ နူးအိသွားအောင်တည်ပါ ။
ငှက်ပျောအူတွေ နူးအိသွားပြီဆိုရင် အရည်တွေ သွန်ပစ် ၊ ရေအေးအေးနဲ့ ဆေးပြီး ရေစစ်ပေးထားပါ ။
ချင်း စပါးလင်နဲ့ ကြက်သွန်ဖြူနီကို ညက်နေအောင်ထောင်းပြီး ၊ စတီးဇွန်း ၁-ဇွန်းစာလောက်ဖယ်ထား ၊ ကျန်တာကို နနွင်းမှုန့်နဲ့ ဆီသတ်ပါ ။
အနံ့မွှေးလာလျင် အသားနွင်ထားတဲ့ငါး ၃ ပုံ ၂ ပုံခန့်ထည့်ပါ ၊ ၂-မိနစ်လောက် ငါးဆီသတ်ပြီးရင် မီးချလိုက်ပါ ။
မုန့်ဟင်းချက်မည့် အိုးထဲကို ငါးပြုတ်ရည်ထည့်ပြီး လိုသလောက် ရေထပ်ဖြည့် ၊ ဆူအောင်တည်ပါ ။
ရေဆူလာလျင် ဆီမသတ်ဘဲ ဖယ်ထားသော ငါး ၊ စပါးလင် ဂျင်း ကြက်သွန်ဖြူနီထောင်း ၁-ဇွန်းစာ တို့ကိုထည့်ပါ ။
အရည်ပွက်ပွက်ဆူလာလျင် ဆီသတ်ထားတဲ့ ငါးဖတ် ၊ နူးအောင်ပြုတ်ထားတဲ့ ငှက်ပျောအူ ၊ ကြက်သွန်နီဥအသေးတွေကို ထည့်ပြီး ပွက်ပွက်ဆူအောင် တည်ပေးပါ ။
ပြီးရင် ဆား၊ ငံပြာရည် ၊ ဟင်းချိုမှုန့် ၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် သင့်ရုံထည့်ပြီး အရသာပြင်ပါ ။
ပြီးရင် မုန့်ဖတ်ထည့် ၊ ကြက်သွန်နီ ဆီချက်ထည့် ၊ နံနံပင်၊ ကြက်သွန်မြိတ်၊ ပဲသီး ၊ ကြက်ဥပြုတ် ၊ ပဲကြော်ထည့်ပြီး ဆွဲနိုင်ပါဘီ…
ဆက်လက်ပြီး ကိုကိုကျောက်မှ ပဲ ငရုတ်ကောင်းမုန့်ဟင်းခါးကို ဆက်လက်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလူဂျီး နာ့ နယ်မြေ စလုံးကျွန်းထဲ ရောက်ပြီးမှ အရှင်လတ်လတ် လက်လွတ်လိုက်ရတယ်။ ဟင်းးး
စိန်ဥ ငရုပ်ကောင်း မုန့်ဟင်းခါး…- ဦးကျောက်ခဲ
ငါးရွှေ ၊ ငါးခူ ၊ ငါးကျည်း ၊ ငါးကြင်း (ဘာမှမရှိရင် NTUC က Sea Bass နဲ့ သမ ) ကို အချွဲ စင်အောင် သေချာဆေးပြီး ခေါင်းဖြတ် ၊ ဗိုက်ခွဲ ကလီစာတွေထုတ် ၊ ရေထပ်ဆေးပြီး စစ်ထားပါ ။
ရေစစ်သွားရင် ငါးကို ဆား ၊ နနွင်း ၊ ငံပြာရည်တို့နဲ့ နယ်ပြီး နာရီဝက်လောက် နှပ်ထားပါ ။
စပါးလင် ၃- ပင်ကို ရေဆေး ၊ အဖျားပိုင်းကိုဖြတ် ၊ အရင်းပိုင်းကို ငရုပ်ကျည်ပွေ့နဲ့ ကြေမထွက်အောင် ခပ်ဖွဖွထုပြီး ထုံးထားပါ ။
မီးဖိုပေါ်မှာ မီးပုံမှန်နဲ့ပဲ ငါးမြုပ်ရုံလောက် ရေကို မှန်းထည့်ပြီး ရေနွေး ဆူအောင် တည်ပါ ။
ချင်း ၊ စပါးလင်နဲ့ ကြက်သွန်ဖြူနီကို ညက်နေအောင်ထောင်းပြီး နနွင်းမှုန့်နဲ့ ဆီသတ်ပါ ။
အနံ့မွှေးလာလျင် အသားနွင်ထားတဲ့ငါးကိုထည့် ၊ ၂-မိနစ်လောက် ငါးဆီသတ်ပြီးရင် မီးချလိုက်ပါ ။
ငရုပ်ကောင်းစေ့ ၁၅-စေ့လောက်ကို ကြက်သွန်ဖြူ ၆-မွှာလောက်နဲ့ ညက်နေအောင် ရောထောင်းထားပါ ။
မုန့်ဟင်းချက်မည့် အိုးထဲကို ငါးပြုတ်ရည်ထည့်ပြီး လိုသလောက် ရေထပ်ဖြည့် ၊ ဆူအောင်တည်ပါ။
ရေဆူလာလျင် ဆန်လှော်မှုန့် စားပွဲတင် ၂-ဇွန်းစာကို ရေကျက်အေးနဲ့ ဖျော်ပြီးထည့်ပါ ။
အရည်ပွက်ပွက်ဆူလာလျင် ဆီသတ်ထားတဲ့ ငါးဖတ် ၊ ငရုပ်ကောင်း ကြက်သွန်ဖြူထောင်း ၊ ကြက်သွန်နီဥအသေးတွေကို ထည့်ပြီး ပွက်ပွက်ဆူအောင် တည်ပေးပါ ။
ပြီးရင် ဆား၊ ငံပြာရည် ၊ ဟင်းချိုမှုန့် ၊ သင့်ရုံထည့်ပြီး အရသာပြင်ပါ ။
ပြီးရင် မုန့်ဖတ်ထည့် ၊ ကြက်သွန်နီ ဆီချက်ထည့် ၊ နံနံပင်၊ ကြက်သွန်မြိတ်၊ ပဲသီး ၊ ကြက်ဥပြုတ် ၊ ပဲကြော်ထည့်ပြီး ပူပူစပ်စပ်လေးဆွဲနိုင်ပါဘီ…
နောက်တစ်နည်းကတော့ ငှက်ပျောအူမစားတဲ့ ငံပြာရည် စားသုံးမှု နည်းတဲ့ ကိုယ့် ယောက်ခမွ မွသဲ ရဲ့ နည်းးး
ဘာလို့ဆို ခါတလေ ငှက်ပျောအူ သွားဝယ်ရမှာ ပျင်းတယ်။
အိမ်အောက်က မလေးအိမ်က ခိုးခုတ်ဖို့လည်း တစ်ခါ အပြင် ၂ ခါ မရလို့။
အဟီးဟီးးး (အာ့ကြောင့် သူငယ်ချင်းတွေက ကိုယ် ချက်ကျွေးမှာ သိပ်ကြောက်တာ မျိုမကျ ကြဝူးးး ခိခိ)
မွသဲ ကိုယ်ပိုင် မုန့်ဟင်းခါး
ငါးကြင်းသုံးဆယ်သား အမကတော့ ငါးဆယ်သားထည့်ဒယ် ငံပြာရည်လျော့ချင်လို့။
အတုံးကိုငံပြာရည် ဂျင်းရည် ကြက်သွန်ဖြူရည်နဲ့နယ် နှပ်ထား။
ကြက်သွန်နီ နှစ်ဆယ်သား ကြက်သွန်ဖြူကြည့်ထည့်
ဟိဟိ စပါးလင် အနုလေးတွေနစ်ချောင်းသုံးချောင်း ဂျင်း နှစ်ကျပ်ခွဲသားလောက်ကို ညက်နေအောင်တခုစီလုပ်။
ကုလာ:ပဲငါးဆယ်သားကိုနူးအောင်ပြုတ် ။
ပြီးရင်အိုးတလုံးထဲအကုန်ပေါင်း ဆူအောင်တည် အရသာမြည်း။
ဒါကတော့ ရှာဖွေလေ တွေ့ရှိလေ။ ကိုယ့် မွမွနိုရဲ့ ကရင် မွင်းငါးပါဗျာ။
ရွှေကျင်မွင်းငါးကို ရှာရင်းတွေ့တာမို့ ထပ်ဖြည့်လိုက်ပါတယ်။
လွယ်ကူချက်စား ကရင်မုန့်ဟင်းခါး- Novy
အိမ်မှာရောက်နေတဲ့ကရင်မလေးက နိုဗွီကို ကရင်မုန့်ဟင်းခါးစားဘူးသလားတဲ့
ကိုယ်တိုင်လည်း အစားအစာ အထူးအဆန်းလေးတွေကို စိတ်ဝင်စားတော့
သူချက်တာလေးတွေကို ဘေးကနေ ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီး
မုန့်ဖတ် – ၅၀ကျပ်သား
ငါး – ၂၅ကျပ်သား
စပါးလင် – ၂ပင်
ဂျင်း – ၂ကျပ်ခွဲသား
ပတဲကောဥ – ၂ကျပ်ခွဲသား
ငရုပ်ကောင်း – အနည်းငယ်
ဆီ – ၂ကျပ်ခွဲသား
ငရုပ်သီးစိမ်း – ၂ကျပ်ခွဲသား
ပူစီနန် – ၁၀ကျပ်သား
ငပိစိမ်းစား – ၂ကျပ်ခွဲသား
ကြက်သွန်ဖြူ – ၂ကျပ်ခွဲသား
ငါးဖယ်ကြော် / ပဲကပ်ကြော် ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ စုံပါပြီး
ငါးတွေကို စပါးလင် အရွက်ကြမ်းတွေနဲ့ပြုတ်ပါ ပြီးသွားရင် အရိုးထွင်ပါ
ဂျင်း နဲ့ စပါးလင်ကိုပါးပါးလှီးပြီး ညှက်အောင်ထောင်းထားပါ
ငါပိစိမ်းစားတွေကိုတော့ ရေနွေးနဲ့ ဖျော်ထားပါ
ထောင်းထားတဲ့ ဂျင်း/စပါလင် /ကြက်သွန်ဖြူ
တွေကို ဆီသတ်ပါ့မယ်မွှေးလာရင် နွှင်ထားတဲ့ငါးထည့်လိုက်ပါ့ ဆီသက်တဲ့ အလုပ်ပြီးပါပြီး
အိုးထဲကို ရေ ၄လီတာလောက်ထဲ့ပါ
အိုးထဲကိုဖျော်ထားတဲ့ ငပိရေ နဲ့ ပါးပါးလှီးထားတဲ့ ပတဲကောဥတွေကို ပွက်ပွက်ဆူလာအောင်တည်ပါ
ပြီးရင်တော့ ဆီသက်ထားတဲ့ ငါးတွေကို ထည့်လိုက်ပါ
ဟင်းခက်မှုန့်နဲ့ ဆားကို သင့်တော်သလိုထဲ့ပါ
ပြုတ်ထားတဲ့ ငှက်ပျောအုနဲ့ ငရုပ်ကောင်းလေးလည်းထဲ့လိုက်ပါအုံး
ဟင်းအိုဆူအောင်ထားတည်ထားတဲ့ အချိန် ဒီဘက်မှာလဲ
ငါးဖယ်ကြော် / ပဲကပ်ကြော်ကိုလဲပြင်ထားပါ
အားလုံးပြီးရင်တော့ ဟင်းအိုးလည်းဆူးပြီးမွှေးနေပြီဆိုတော့ စားလို့ရပါပြီ
ပုဂံထဲ့ကို မုန်ဖက်နဲနဲ / ပူစီနန် /ပဲပင်ပေါက် /ငရုပ်သီးပြုတ်ထောင်း / ငါးဖယ်ကြော် / ပဲကပ်ကြော်
မကျီးသီးရည် အားလုံးထဲ့ပြီးရင် ဟင်းရည်ပူပူလေးထဲ့ပြီးပူပူစပ်စပ်ချဉ်ချဉ်မွှေးမွှေးလေးစားပေတော့…
ဒီလောက် ဆို မွင်းငါးလွမ်းခြင်း ပြည့်စုံလောက်ပြီထင်ပါရဲ့။
ဒီနေ့ မိုးတွေ အရမ်းရွာနေတာ။
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ မုန့်ဟင်းခါး ၃ ပွဲနဲ့ ကော်ဖီ ၂ ခွက်လောက်ဆို ဒီနေ့က ပိုပြီးပြည့်စုံးသွားမယ်ထင်ရဲ့။
စာတွေ မဖတ်ဘဲ (ကျုပ်မှ မချက်တတ်တာ :P)
ပုံတွေပဲ ကြည့်ပြီး သွားရည် ယို သွားတယ် ဆိုရင် နည်းနည်း များ လွန်သွားမလားဟင်….း)
ဒီ ပုံတွေ ရဖို့ ညက ကွန်ပြူတာကို ပြန်မွှေရတယ်။
မုန့်ဟင်းခါးကို ရန်ကုန်မှာနေရင်းနဲ့တောင် လွမ်းချင်းတနေရတဲ့ဘ၀ပါ ..
ဆိုင်မုန့်ဟင်းခါးတွေ အချိုမှုန့်အသုံးများလွန်းလို့ မုန့်ဟင်းခါးစားချင်ရင် ကိုယ်တိုင်ချက်စားမှရပါတော့တယ် ..
ခဏခဏမချက်စားဖြစ်တော့လဲ လွမ်းရတော့တာပေါ့ ..
အခုတောင် လွမ်းလာပြီ …
ချက်စားဖို့ ကြိုးစားရတော့မယ် ..
ရန်ကုန်သွားလို့ မုန့်ဟင်းငါးစားတိုင်း သွေးတက်လို့။
ငပိပါတယ် လို့ ပြောကြလို့။
နောက်ပြီး ကျနော်က အချိုမှုန့်နဲ့ မတည့်ဘူးးး
စလုံးမှာ မုန့်ဟင်းခါးကို ဆိုင်မှာ သွားစားတိုင်းလည်း အလိုမကျသံကို နားညည်းရတာလည်း တစ်မျိုး ဒုက္ခရှိသေးးး
ကိုကိုလေး ချက်နည်း နောက်မှ ပြန်ဖြည့်ပါဦးမယ်။
သူ မုန့်ဟင်းခါး အဆာကျယ် က လည်း ၁ နှစ် ၁ ခါ ကို ချက်ဖို့ အာပေါက်အောင် ပြောရလို့။
သူချက်ပြီး ကိုယ်က လိုက် လက်စ သိမ်းဆိုတော့ ကိုယ်က ပိုပင်ပန်းလို့ မချက်ခိုင်းပဲ
ဒေါ်ချိုနဲ့ တင်တင်အေးတို့ကိုပဲ ချက်ခိုင်းနေရတယ်။
မုန့်ဟင်းခါးကို မြန်မာ့ရိုးရာစစ်စစ်လို့ပြောရင် ကမ္ဘောဒီးယားတွေနဲ့ စစ်ခင်းရမယ်ထင်ပါရဲ့…
သူတို့တွေလည်း မုန့်ဟင်းခါးကို မက်မက်စက်စက် စားကြပါတယ်…
မုန့်ဖတ်ကို မြန်မာတွေလို အချဉ်ဖောက် ၊ လက်နှိပ်ခွက်နဲ့ ညှစ်ချပြီး ပူပူနွေးနွေးစားတာပါ…
ရေချိုငါးအကောင်ကြီးကြီးကို စပါးလင် ဂျင်း နနွင်းနဲ့ပြုတ်ပြီး ဗန်းထဲမှာ ချပေးထားပါတယ်…
မုန့်ဟင်းခါးစားရင်း ငါးဖတ်ထပ်စားချင်ရင် ဇွန်းကလေးနဲ့ ကော်ပြီး ပန်းကန်ထဲထည့်စားရုံပါပဲ…
ယိုးဒယားတွေလည်း မုန့်ဟင်းခါး အတော်စားကြပါတယ်… မုန့်ဖတ်လည်း အတော်ကောင်း…
သူတို့က ဟင်းရည်ကို ငါး ၊ Fish Ball ၊ ကြက် ၊ ဝက် ၊ အမဲသားနဲ့ချက်ကြပါတယ်…
အရသာနဲ့ ပါဝင်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး မုန့်ဟင်းခါးဟင်းရည် ၁၂-မျိုးလောက် ကွဲပါသတဲ့…
နဲနဲသစ်ဆန်းတာတော့ သူတို့က မုန့်ဟင်းခါးထဲ ပဲပင်ပေါက် ၊ မုံညှင်းချဉ် ထည့်စားတာပါ…
မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းက ယခင် မွန်တွေကြီးစိုးရာအရပ်မို့…
မုန့်ဟင်းခါးဇာတိ မွန်-ခမာ လို့ ပြောရင် လွဲအံ့မထင်…
ဟင်းရည် အဆစ်တောင်းတာတော့ မိတ်အင်ဘားမား စစ်စစ် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်… ဟီ ဟိ
အဟတ်စ်… မန့်ဖို့ ကျန်ခဲ့လို့…
ဟင်းရည်အိုးမီးချခါနီးရင် ထန်းလျက်ခဲ မန်ကျည်းစေ့လောက်ကို အမှုန့်ချေပြီးထည့် …
အရသာ သူမတူအောင် ကောင်းပါ၏…
ဟင်းချိုမှုန့်များတိုင်း မကောင်းပါဘူး… အရသာပျက်ပြီး ရေပါငတ်ပါတယ်…
မှန်ရာပြောရရင်… အိမ်မှာ နှမ ၃-ယောက် နဲ့ အမေက မုန့်ဟင်းခါး သရဲတွေမို့…
နေ့တိုင်းလောက်နီးနီး ချက်စားကြတာမို့… မုန့်ဟင်းခါးနံ့တောင် မခံချင်…
အခုလို အပြင်မှာရောက်နေမှ ရံဖန်ရံခါ ချက်စားဖြစ်တာပါ ခီညား…
တောင်ငူမုန့်ဟင်းခါးမှာထည့်စားတဲ့ဆန်လှော်မှုန့်က ရိုးရီုါ်ဆန်လှော်ဆိုရင် ဆန်လှော်နံ့ပိုမွှေးပေမယ့်
ဟင်းရည်ထဲမှာ အလွယ်တကုမပျော်ဝင်နိုင်ပါဘူး ။
သုပ်စားတဲ့ထဲထည့်ရင်လဲ ကျလိကျလိနဲ့ သွားထဲံလာပြီးဂျစ်နေတတ် ပါတဟ် ။
အကောင်းဆုံးက ဒေါ်ပ်ိုရဲ့ဆန်လှော်မှုန့်ပါ ။
ဒေါ်ပိုဆိုတာ အရင်တုန်းကတော့ ရွှေဆံတော် အရှေ့ဘက်မုဒ်မှာရောင်းတာပေါ့ ။
အခုတော့ မုန့်ဟင်းခါးနဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေသာရောင်းတော့မယ်ထင်တယ် ။
ဒါပေမယ့် ဟင်းရည်ကျဲလို့ခေါ်တဲ့တောင်ငူမုန့်ဟင်းခါးအတွက်ဆန်လှော်ကိုတေ့ာ တောင်ငူရဲ့နေရာအတော်များများမှာရောင်းနေကြပါပြီ ။
ဒေသခံအစားအစာ ဒါမှမဟုတ် လူမျိုးစုတစ်ခုရဲ့အစားအစာကို ထိထိမိမိအရသာပေါ်အောင်စားချင်ရင်တော့
သူတို့တွေရဲ့ဓလေ့အတိုင်းစားကြည့်ဖို့ အကြံပြုပါတယ် ။
ဥပမာ ချစ်တီးထမင်း ဆိုပါတော့ ……
ငှက်ပျောဖက်လေးခင်းပြီး ပဲဟင်းဆမ်း ၊ ငရုပ်သီးစိမ်းလေးကိုဆားနဲ့တို့ပြီး ဖလူးဖလူးနဲ့အားရပါးရလက်နဲ့ဆွဲလိုက်ရမှ ပိုကောင်းသလိုလို
ဒီတော့ တောင်ငူမုန့်ဟင်းခါးကိုလည်း ဒေသခံတွေအများစုစားတဲ့အတိုင်းစာကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖြက့် ……………
သုပ်စားသည်ဖြစ်စေ အရည်ဖျော်ဆမ်းစားသည်ဖြစ်စေ ခရမ်းချဉ်သီး ပါးပါးလှီးထားတာလေးထည့်စားကြညမ့ပါ ။
ပြီးတော့ ပဲတောင့်ရှည် ပဲသီးစိမ်းကိုလည်း ပါးပါးမလှီးပါနဲ့ ။
လက်တစ်ဆစ်လောက်ချိုးပြီး ထည့်စားပါလေ ။
တချို့ဆိုရင် ပဲတောင်ရှည်ကို အခြောင်းလိုက်တကြွတ်ကြွတ်နဲ့ကိုက်ဝါးလိုက် မုန့်ဟင်းခါးတစ်ဇွန်းစားလိုက်လုပ်ကြပါတယ် ။
အစပိုင်းမှာ ပဲသီးစိမ်းနံ့နံတယ်ထင်ရပေမယ့် စားရင်းနဲ့ မတူကွဲပြားတဲ့အရသာကိုခံစားရင်း
ပဲသီးစိမ်းနံ့လေးကိုက မွှေးသလိုလို ………
တောင်ငူက နံမည်ကျော်မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်တွေမှာဆို အဲဒီပဲတောင်ရှည်စိမ်းလေးတွေကို အချောင်းလိုက်စိတ်ကြိုက်ကိုက်ဝါးဖို့ ဇလုံထဲထည့်ပြီးချပေးထားတတ်ကြောင်းပါ
တောင်ငူမုန့်ဟင်းခါးချက်ရင် သုံးချိုးတစ်ချိုးကို ငါးရံ့လေးထည့်ကြည့်ပါ။
ကျန်တဲ့နှစ်ချိုးက်ုတော့ ငါးခူ သို့မဟုတ် ငါးကျည်းထည့်ပါလေ ။
ကိုကိုကျောက် မန့်ရော ကိုကိုဆာ မန့်ရော စိမ်းချင်တာ။
ဒေသစာကို ဒေသအတိုင်း စားသင့်တယ်ဆိုတာကို ချွင်းချက်မရှိထောက်ခံကြောင်းပါ.
ကိုကိုကျောက်ပြောတဲ့ ငါးဖယ်ရိုးပြုတ်ရည်အကြောင်း ခုမှ သိရလို့ ကျေးကျေးပါ၊
“ကိုမြဒင်ရယ်… လှေနံနှစ်ဖက်နင်းမှာဖြင့် ခင်စိန့်ဘက်သာ ဖိနင်းလိုက်စမ်းပါ”
ဟီ ဟိ… ခွက်ဒစ်တူ ကျားခင်စိန် at သားဗိုလ်အောင်ဒင်…
ပြီးမှ ခင့် ကိုလေ “သစ္စာမရှိတဲ့ လူမိုက်ရယ်လို့” အပြစ်မဆိုရဘူးနော်။
တောင်ကြီးကအစ်ကိုချက်ကြွေးတာ ရွှေကြည်မှုန့် ပါတယ်။
ရွှေကြည်မှုန့် လှော်ပြီး ညက်မှုန့်နေအောင်ထားပြီး
မုန့် ဟင်းရည်ပွက်ပွက်ဆူတဲ့ချိန်ထည့်ပါတယ်။ ဦးကျောက်ပြောသလို မုန့် ဟင်းအိုးရခါနီး
ထန်းလျှက်ခဲထည့်ပါတယ်။စားလို့ ကအတော်ကောင်းတယ် ။ အဲဒီအစ်ကိုက တောင်ကြီးမှာ
မုန့် ဟင်းခါးရောင်းတဲ့သူ ။ တောင်ကြီးမှာတော့ နာမည်ကြီးတယ်လို့ ပြောကြတာပါ ။
ကျန်တာတော့ အစုံထည့်ပါတယ် ။ ငါးဖယ်ငါးနဲ့ ချက်တာပါ ။
ခုတောင်ပြောရင်းနဲ့ တောင်ကြီးသွားပြီးတောင် စားချင်မိပါတယ် ။
ဒါမဲ့ ငါး ချိုချို တာ ပိုကြိုက်လို့။
ကိုကိုလေးချက်တဲ့ မွင်းငါး မီး စားချင်ဒယ်..စားချင်ဒယ်..
အာ့ဒွေ ကြောက်ရို့ ဖွက်ထားတာကို မြင်ဖြစ်အောင် မြင်တယ် ကျန်းးး
ရယ်ဒီမိတ်မုန့်ဟင်းခါးထုတ်တွေက ပိုပြီးသွေးတိုးတယ် ခင်ရေ ..
အဲဒီထဲမှာ ငါးပိနဲ့ အချိုမှုန့်အများကြီးပါတယ် …
အခုနောက်ပိုင်း မုန့်ဟင်းခါးချက်ရင် အကြော်အတွက်ပါ ဒုက္ခရောက်ပါတယ် .. ရယ်ဒီမိတ်ကြော်ပြီးသားရောင်းတဲ့ ပဲကြော်ကို မစားချင်တဲ့အတွက် အကြော်ကိုယ်တိုင်ကြော်ရသေးတယ် .. အလွန်တကူပဲ ကြက်သွန်နီပါးပါးလှီးပြီး ဆန်မှုန့် (သို့မဟုတ်) တန်ပူရာအမှုန့်တစ်မျိုးမျိုးနဲ့နယ်ပြီး ကြော်ရတဲ့အလုပ်ကလဲ ပိုပါသေးတယ် ..
စိန်ဥမုန့်ဟင်းခါး (ကျွန်မကတော့ တောချက်လို့ပဲခေါ်လိုက်မယ်) ကို ညှပ်ခေါက်ဆွဲဖတ်နဲ့ မန္တလေးပဲကြော်နဲ့ စားရင် အလွန်လိုက်ဖက်လို့ စိတ်ပါရင် မန္တလေးပဲကြော်ပါ ကြော်ရသေးတယ် ..
ပဲကပ်ကြော်က လွဲရင် ကျန်တဲ့ အကြော် ကိုယ်တိုင်ကြော်တယ်။
မုန့်ဟင်းခါးထဲ ပြည်မြို့မှာ ချက်တဲ့ မုန့်ဟင်းခါး
တစ်ပွဲ မပြောနဲ့ ဆယ်ဇွန်းပြည့်အောင် မစားနိုင်. . .
ကျောက်ဆည်က မုန့်ဟင်းခါးတော့ ကြိုက်တယ်
မုန့်ဟင်းခါးထဲ ငါးချဉ်ထည့် စားကြတာတဲ့။ ကြားဖူးတာ။ မြို့နာမည် မမှတ်မိ။
ရှောက်သီးလေး ညှစ်ပြီး ငရုပ်သီးစပ်စပ်နဲ့
အံဇာ နေမကောင်းဘူး ကြားတယ်
ဘယ်သူ သေသေ နာ မုန့်ဟင်းခါး စားရ ပြီးရော ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ပါလားး
နာ့ မောင်လေးက မိန်းမ မရသေးပါဘူးအေ။
အံဇာ နေမကောင်းဖြစ်တာကို သတိရသွားလို့ပါ မမဂျီးရဲ့
မုန့်ဟင်းခါးထဲ မုန့်စိမ်းပေါင်း ထည့်စားတယ်ဆိုတာလည်း
နာ့ အီကြာကွေးကို ထည့်စားမိတာတောင် ရှုပ်တယ် အပြောခံရတာ။
အာ့တွေသာ ထည့်ကျွေးလို့ကတော့ ဖနောင့်နဲ့ ပေါက်ခံရလိမ့်မယ်။
Mi Phyu says:
မွင်းခါး ကို ပဲခူးမှာ ငါးချဉ်ထည့်စားလေ့ရှိပါကြောင်း
ပဲခူး မွင်းငါးတော့ မစားဖူးဘူး။
ပဲခူးက မနီရဲ့ ငါးချဉ်တော့ ကြိုက်တယ်။
ဒါရှို မုန့်စိမ်းပေါင်း ထည့်စားတာ ဘယ်မြို့ပါလိမ့်။
ရွှေကျင်မြို့မှာ ထည့်စားတာလေ ရွှေကျင်မုန့်ဟင်းခါး
စားကောင်းတယ် ဒါပေမဲ့ သွေးတိုး ရှိရင် တသက်မှာ တခါပဲ စားပေါ့ :loll:
မုန့်ဟင်းခါးက မိုင်ဖေးဘရိတ်လေ ဘယ်အချိန်စားစား ဘယ်နေရာစားစား
ခု မန်းလေးမှာ ဆရာကြီးမုန့်ဟင်းခါး လည်းပေါ်လာပြီ ရွှေလက်ရာနဲ့ အပြိုင်
ဟိုတခေါက် က ပြန်လာတော့ ဆရာဂျီး မွင်းဂါး သွားစားသေးတယ်။
ရွှေကျင် မွင်းငါးချက်နည်းလေး ဘယ်က ရပါ့မလဲ။
မနိုဗီ ရဲ့ ကရင်မွင်းငါးးးး
ဆရာဂျီး မုန့်ဟင်းခါးက ကောင်းဘူး..ကိုယ်မကြိုက်လို့လားမသိဘူး
ရွှေလက်ရာကောင်းတယ်..အခုတစ်လော မိန်းနားက မအေး မုန့်ဟင်းခါး
ခဏခဏ စားဖြစ်နေတယ်…. မမဂျီးလာရင် လိုက်ကျွေးနော်…..
မအေး ကိုတော့မစားဖူးဘူးးး (မုန့်ဟင်းခါးးး)
.ကေဇီရဲ့ မွင်းငါးလွမ်းခြင်း ဖတ်ရင်း…မွင်းငါးပွဲပြင်ထားတာမြင်တော့..
.ကျုပ်လည်းမွင်းငါး စားရင် ညှပ်ဖတ်နဲ့အရောပဲ စားလေ့ရှိတယ်…
.ခုတလော(တစ်နှစ်လောက်ရှိတော့မယ်) နံက်ဘရိတ်ဖတ်စ်တိုင်းမွင်းငါးပဲစားဖြစ်နေတာ :))
.ရန်ကုန်မှာတော့ မြောင်းမြဒေါ်ချိုမွင်းငါး ကြိုက်၏
.တခါတလေ နီးရာ ကန်လမ်း အင်းစိန်ဖက်ထိပ်နားက လျှာဂျွန်းပြန်မှာစားလိုက်တာပဲ
ခါတလေ အိပ်ရာနိုးနိုးချင်း မွင်းဂါး စားချင် စိတ် ပေါ်တဲ့ နေ့များဆို သိပ်ဒုက္ခရောက်တယ်။
နောက်မှ မြီးရှည်လွမ်းခြင်း လာအူးမယ်။
မွဝေရဲ့တောချက်မွင်းခါးလေးရယ် ကျောက်စ်ရဲ့ စိန်ဥငုပ်ကောင်းမွင်းခါးလေးရယ် ပိုကြိုက်…
ပြောရရင်တော့ ငါးဖတ်နိုင်းခြင်း ငုပ်ကောင်းမွေးမွေးလေးနဲ့ မြောင်းမြဒေါ်ချိုမွင်းခါး အကြိုက်ဆုံးဗျ
ဒေါ်ချို ကို အပြင်မှာ မစားဖူးဘူးးး
ဒေါ်ချို့ မွင်းငါး ကို အပြင်မှာ မစားဖူးဘူးးးး
ရှိတယ် ဗဟန်းမာလေ… ရွှေဒဂုံနဲ့နီးတယ် ရမ်းရမ်းစားကောင်း :sar:
ဒါက မုန့်ဟင်းခါး Lovers ဖဘပေ့(ချ) က မ လာတာ။
Phoo Nang‎မုန့်ဟင်းခါး Lovers
မုန့့် ဟင်းခါးစားချင်စိတ်ပေါ်တာများ
ပြောကို မ့ပြောချင်ပါဘူး တစ်ကယ်
ဒီတစ်ခါ ရွှေအိတို့ ၊ခင်ထွေးရီအနှစ်ထုတ်လဲကုန်ဆိုတော့
ကမန်းကတန်းမို့မစုံမလင်ရယ်
ရှိတဲ့ညပ်ခေါက်ဆွဲနဲ့ ပဲကြော်နဲ့ 
ပဲတောင့်ရှည်၊နံနံပင်၊ငရုတ်သီးလှော်မှုန့် နဲ့ 
စလုံးက ကိုမောင်ကိုသက်ရဲ့ အိမ်ရှင်ထီး မီးဖိုချောင် – Hubby Kitchen က မ လာတာ။
မုန့်ဟင်းခါးကျဲကျဲ တောချက် ချက်မယ်
ငါးငံပြာရည် ဆားနည်းနည်း ထန်ညက်တခဲ
( မုန့်ဟင်းခါးမှာ ထညက်ထည့်ပါ)
ငါးအသားနူးရင် ဆယ်ပြီး အသားနွှင်ပါ။
ငါးအရိုးတွေကို ညက်အောင်ထောင်းပြီး အရည်ယူပါ။
ဆီသတ်ဖို့ အတွက် ချင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ စပါးလင်စတာတွေကို ညက်အောင်ထောင်းထားပါ။ ကြက်သွန်နီကို ပါးပါးလှီးပါ။ ငါးအသားနွှင်ထားတာကို နနွင်းမှုန့် ငရုတ်သီးမှုန့်နဲ့ ဆီသတ်ပါ။
တည်ထားတဲ့ ဟင်းရည်ထဲကို ငါးပြုတ်ရည်ထည့်ပါ။ ငါးဆီသတ်ကိုထည့်ပါ။
ဆန်ကို လက်တဆုတ်လောက်ယူ။ အိုးထဲမှာ ထည့်ဆလှာ်ပေးပါ။ အနံလေးမွှေးလာရင် ဆန်လှော်ကို ညက်နေအောင်ထောင်းပါ။
အဲ့ဒီဆန်လှော်မှုန့်ကို ရေနံ့ဖျော် ခုဏကတည်ထားတဲ့ ငါးပြုတ်ရည်ထဲကို ထည့်ပြီး မွှေပေးပါ။
ပွက်တဲ့အထိမွှေပေးပါ။ အောက်ခြေမှာ ကပ်တတ်လို့ပါ။
ဟင်းရည်ကို ကျတဲ့အထိသာ မီးအေးအေးနဲ့တည်ထားပေးပါ။
ပြီးရင်တော့ အကြော်စုံနဲ့ စားပေါ့ဗျာ။
တောချက် မုန့်ဟင်းခါး ရပါပြီဗျို့……။
မန့်​သာမန့်​ရ ရပါ့မလားမသိ။ ဇီဇီ​ရေ ပထမဆုံးပို့်​စ်​​လေးမို့ လွမ်းမိသွားပြီ။:)
ပထမဆုံး ပို့(စ) လေးးး ပြန်ဖော်လိုက်မိတာ။
မဝေ ပို့(စ) ထဲ တဂျီး မေးတာမြင်လို့ ဘဲသွေးထည့်ချက်ချင်ရင် ချက်လို့ရအောင် ဒီလင့်က ယူပြတာ။
မုန့်ဟင်းခါး ချက်စားရအောင် – Posted by Khine at Sunday, March 23, 2014
-ငါးခူ (သို.) ငါးရံ့ – 800 g ကို သန်.စင်ကာရေဆေးပြီးနနွင်း၊ငံပြာရည်နယ်ထားပါ။
-ကြက်သွန်နီ-5လုံး ကို အခွံခွာရေဆေးပြီးထောင်းထားပါ။
ကြက်သွန်ဖြူ- 10 တက်- ဂျင်း- တစ်လက်မခန်.ကို အခွံခွာရေဆေးပြီး
-စပါးလင် -(5) ချောင်း ကို အရင့်တွေဖယ်ကာ ပါးပါးလှီးပြီး ညှက်အောင်ထောင်းထားပါ။
– ဆန်လှော်မှုန်.- ဆန်ချိန်ခွက်တစ်ခွက် ကို ရေ တစ်ခွက်နှင့်ကြေအောင်ဖျော်ထားပါ။
-နူးအောင်ပြုတ်ထားတဲ.ကုလားပဲ – ဆန်ချိန်ခွက်တစ်ခွက် ကိုညှက်အောင်
( အချို.က ရွှေကြည်လှော်၊ မြေပဲလှော်မှုန်.၊ ကုလားပဲအလှော်မှုန်.၊ပဲဝါလေးပြုတ် စသည်ဖြစ်
-ကြက်သွန်နီဥ(သေး) – 1 kg ကိုလဲ အခွံခွာကာ ရေဆေးထားပါ။
-ငါးပျောအူနုနု – ရှစ်လက်မကို ပါးပါးလှီးကာ နနွင်း၊ဆား၊ရေတို.နှင့်နယ်ကာ
-ဆီ၊ ဆား၊ နနွင်း၊ ငရုပ်သီးအရောင်တင်မှုန်.၊ အရသာမှုန်.၊ငံပြာရည်၊ငရုတ်ကောင်း အနဲငယ်စီ
-မုန်ပာင်းခါးဖတ်- (1) ပိသာ (သို.) မုန်.ပာင်းခါးဖတ်ခြောက်နှစ်ထုပ်ကို
15 မိနစ်ခန်.ရေစိမ်ပြီး 10 မိနစ်ခန်. မုန်ဖတ် အမျှင်ကျက်အောင်ပြုတ်ကာ
-ပဲသွေး (သို.) ဘဲသွေး- 5တုန်းကို ရေဆေးကာ ပြုတ်ပြီး ထက်ခြမ်းခြမ်းထားပါ။
-ငရုပ်သီးအလှော်မှုန်. – ထင်းစားဇွန်း (5)ဇွန်း
-ကြက်ဥ (သို.) ဘဲဥ – 10 လုံးကို ပြုတ်ပြီး အခွံခွာကာ တစ်ဝက်ကို ပါးပါးလှီးထားပါ။
-ငါးဖယ်ခြစ်ကြော် – 15 ခုကိုလဲ ပါးပါးလေးတွေညှပ်ထားပါ။
-ပဲကပ်ကြော် – 10 ခု ကို ခပ်ကြီးကြီးချိုးထားပါ။
(သို.) ဗူးသီးကြော်။ကြက်သွန်ကြော၊အီကြာကွေး မိမိနှစ်သက်ရာကိုထည်.စားပါ။
-နံနံပင် – 15 ပင်ကို ရေစင်စင်ဆေးပြီး မထူမပါးလှီးထားပါ။
-သံပုရာသီး –2လုံးကို ၈ စိတ်စီစိတ်ထားပါ။
-ပဲတောင့်ရှည်သီး-5တောင့်ကို ပါးပါးလှီးထားပါ။
-နနွင်းငံပြာရည်နယ်ထားတဲ. ငါးခူကိုေ၇ ဆန်ချိန်ခွက် (၂ ခွက်)စပါးလင် 3ချောင်းကို
ရေဆေးပြီးသုံးပိုင်းဖြတ်ကာငရုပ်ကျဉ်ပွေနှင့်အနဲငယ်ထုပြီး အိုးတစ်လုံးတွင်ထည်.ကာ ငါးကျက်သည်အထိ 15 မိနစ်ခန်.ပြုတ်ထားပါ။
-ငါးကျက်လျှင်အသားများကိုထွင်ကာ အရိုးမှာကိုထောင်းပြီး ငါးပြုတ်ရည်နှင့်ရောကာ မီးဖိုပေါ်တွင် ဆူအောင်တည်ပြီး အရိုးများကို စစ်ပြီး မုန်.ပာင်းခါးချမည်.အိုးကြီးထဲသို. ငါးပြုတ်ရည်များထည်. ကာ ရေ5လီတာ ခန်.ထည်.ကာတည်ထားပါ။
-ငါးဆီသတ်မည်.အိုးထဲသို. ဆီ ထမင်းစားဇွန်း4ဇွန်းခန်.ထည်.ကာ ဆီကျက်လျှင် ထောင်းထားတဲ.စပါးလင်၊ဂျင်းကြက်သွန်ဖြူ၊နီ၊နနွင်း၊ ငရုပ်အရောင်တင် တို.ကိုထည်.ပြီး နီညိုရောင်သန်းသည်အထိ ဆီသတ်ကာ ငံပြာရည်၊ ထွင်ထားတဲ.ငါးအသားများ အရသာမှုန်.၊ဆားနှင့် ငါးပြုတ်ရည် အနဲငယ်ထည်.ပြီး ဆက်တိုက်မွေကာ ခြောက်ပြီးဆီပြန်သည် အထိချက်ပါ။
-ထိုနောက် ပွက်ပွက်ဆူအောင်တည်ထားသော ပာင်းရည်အိုးထဲသို.ငါးဆီသတ်ကို လောင်းထည်.ကာ ဆက်တိုက်မွေပါ။ ဖျော်ထားတဲ.ဆန်လှော်မှုန်. ၊ချေထားတဲ.ကုလားပဲ တို.ကိုထည်.ပြီး ဆန်မှုန်.များခဲမသွားစေရန် ပာင်းရည် ပွက်သည်အထိ ဆက်တိုက်မွေကာ အခွံသင်ထားတဲ.ကြက်သွန်နီ ထည်.က မိနစ်နှစ်ဆယ်ခန်.ရေ အနဲငယ်ကျသည် အထိမီးဖိုပေါ်တွင်တည်ထားပြီး ပါးပါးလှီးထားတဲ.ငါးဖယ်၊ ဘဲဥနှင့် ငှက်ပျောအူ၊ ငရုပ်ကောင်းမှုန်.၊ ငံပြာရည်၊ ဆား၊ အရသာမုန်.၊ပဲသွေးတို.ကို.ထည်.ကာ မီးအေးအေးနှင့် မုန်.ပာင်းခါးပာင်းရည် မွေပြီးပွက်လာသည် အထိတည်ကာ အပေါ. အငံပြင်ပြီးလျှင် မုန်.ပာင်းခါးပာင်းရည်ရ ပါပြီရှင်။
မုန်.ပာင်းခါ.ထည်.စားမည်.ပုဂံလုံးထဲသို. မုန်.ဖတ် လက်တစ်ဆုတ်ထည်.ပါ။
ထိုနောက် ပဲကြော်၊ ငါးသလောက်ဥ၊နံနံပင်၊ပဲသီး၊ ငရုပ်သီးမှုန်.၊ သံပုရာသီးတို.ကို ထည်.က မုန်.ပာင်းခါးပာင်းရည် နှင့် အိုးဘဲဥ၊ ပဲသွေး၊ ငါးဖယ်၊ ငှက်ပျောအူတို.ကို ဆယ်ထည်.ကာ အရသာရှိသော မနက်စာ အတွက်မုန်.ပာင်းခါးကို သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီရှင်..
-များသောအားဖြင့်ပါးပါးလှီးထားတဲ. ငှက်ဖယ်နှင့် ဘဲဥကိုပာင်းရည်ထဲထည်.မချက်ပဲ မုန်.ပာင်းခါးစားသုံးချိန်မှထည်.ကာ စားသုံးကြပါတယ်..
မုန့်ဟင်းခါးဆို အကုန်နီးပါးကြိုက်တယ် ဘယ်လောက်စားစားမရိုးဘူး။ မုန့်ဟင်းခါးဆို အရည်ပြစ်ပြစ်ကို သိပ်သဘောမတွေ့ဘူး။ ငရုတ်ကောင်းမုန့်ဟင်းခါးဆိုတာရှိသေးတယ် အရည်က စိမ်းဖန့်ဖန့်နဲ့ သူလည်း တစ်မျိုးစားကောင်းတယ်။ ထားဝယ်ဘက်ကဆို ထားဝယ်မုန့်ဟင်းခါးက အခြားမုန့်ဟင်းခါးတွေနဲ့မတူ တအားကွဲထွက်တယ်။ ဒါမယ့် သူလည်း စားလို့ကောင်းတယ်။ မုန့်ဟင်းခါးဆို နံပြားနဲ့ကော အီကြာကွေးနဲ့ကောကြိုက်တယ်။ ဘူးသီးကြော်နဲ့လည်းကြိုက်တယ်။ ပဲကြော်နဲ့တော့ မကြိုက်ဘူး။ နံနံပင် ပဲသီး အကုန်ထည့်စားတယ်။ ငှက်ပျော်ပင်ဖက်လည်းကြိုက်တယ် ကြက်သွန်နီဥလည်းကြိုက်တယ်။ ကျတော့်အကျင့်က မုန့်ဟင်းခါးကို ရေပေါလောကြီးမစားတတ်တာပဲ မုန့်ဖက်များများနဲ့ ထွေးထွေးလေးပဲစားတယ်။ နောက်နေ့ ထားဝယ်မုန့်ဟင်းခါးချက်နည်း ရေးတင်ဦးမှပါ။း)))
တင်ပြီးမှ ဒီထဲ ပေါင်းထည့်ထားမယ်။
မုန့်ဟင်းခါးကို.. ဗမာစာစစ်စစ်လို့ထင်နေတာ.. သေပြီဆရာကျောက်ရေ့…။
မုန့်ဟင်းခါးကိုကြိုက်သမို့.. ဒိုမိန်းနာမယ်( Mohinga.org) တောင်.. လွန်ခဲ့တဲ့…၇နှစ်ကတည်းက၀ယ်ထားတာ..။
မုန့်ဟင်းခါးဟင်းရည်အဆစ်တောင်းတာ.. မင်းသိင်္ခ၀တ္တုထဲဖတ်ဖူးတာကတော့… သူ့ထဲကဇတ်ကောင်တယောက်ရဲ့အဖိုးကစတီထွင်တောင်းတယ်ဆိုလားပဲ..။
အမှတ်မမှားရင်.. ဟင်းခါးဆိုတာက.. မြန်မာစာ..စကားထဲ.. ငရုပ်ကောင်းနိုင်နိုင်ထည့်တဲ့.. ဟင်းရည်ပဲ..။
မုန့်ဖတ်ထည့်သမို့.. မုန့်ဟင်းခါး အမည်များဖြစ်ရော့ထင်..။
.အိမ်တွင်းလက်မှုကျောင်းက.. ကျောင်းအုပ်ကြီး ဒေါ်စန်းလေးသင်ပေးဖူးတာကတော့… မုန့်ဟင်းခါးဟင်းရည်အိုးဆူပြီးကျက်ပြီးမှ.. ဆီကျက်ထဲက..ကြက်သွန်ဖြူတွေထည့်ခတ်လိုက်ရင်..အရသာထူးဆိုတာပဲ..။
ဒီပို့စ်ကို.. သတင်းစာထဲသုံးချင်တယ်… ဇီမမရေ..။
စုံအောင် စု ပေးမယ်။
ဦးဆာ ရဲ့ အညာ မုန့်ဟင်းငါး၊
မွန်မွန်ရဲ့ ဒေးဒရဲ မုန့်ဟင်းငါး
အောင်မိုးသူရဲ့ ထားဝယ် မုန့်ဟင်းခါး တွေ လာဦးမှာမို့။
ငါး ကို ဦးစားပေးချက်လို့ မုန့်ဟင်းငါး လို့ ခေါ်သလား လဲ ကြားဖူးလို့။
မုန့်ဟင်းခါး စားတယ်တို့လည်း ကွဲကြသေးတယ်။
သဂျီးရေ… မုန့်ဟင်းခါးက မွန်-ခမာ စာ စစ်စစ်ပါ…
ယိုးဒယားမုန့်ဟင်းခါးမှာ အရည်ကျဲတာလည်းရှိပါ့… Khanom Jin Nam Ya
အသားပါတာ ဆိုရင်တော့… Khanom Jin Nam Ngiao
အုန်းနို့ပါတာ ၊ ခရမ်းကြွတ်သီးပါတာ ၊ etc…. အမျိုးစုံရှိပါတယ်…
လာအိုတို့ ဗီယက်နမ်တို့မှာလည်း သူ့စတိုင်လ်နဲ့သူ ရှိတာမို့…
အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ Common Rice Noodle Soup လို့ပြောရင် ပိုမှန်မယ်…
ဟင်းရည်ကို.. ငါးပြုတ်ရည်နဲ့ချက်တာဆိုတော့… ငါးရှိတဲ့အရပ်တွေချက်မပေါ့နော..။
ပြောရရင်.. ဂျပန် မိဆောရှိရု ရိုးရာစစ်စစ်က..
နောက်တရက်ကျမှ. အဲဒီရေထဲ.. ဆန်မှုန့်ရယ်.. ပဲရယ်.. ကြိတ်ထားတဲ့အနှစ်(မိဆော)ထည့်ပြီးလုပ်တာ..
လွယ်အောင်.. ခုခေတ်ကတော့.. ဒရှိ(ငါးမှုန့်)ကို .. သုံးပြီးချက်ကြတာ..။
ကြက်သွန်မိတ်၊ တိုဟူး(၊အစိမ်း၊ အကြော်) ပင်လယ်ရေညှိပြား၊ ခရုကမာ၊ ဂဏန်း၊ ငါး၊ ပုဇွန်၊
မုန့်ဟင်းခါးကို.. မိဆောနဲ့လက်တည့်စမ်းဖူးသူများ… ရှိကြမလားလို့..။
တကျောင်းတဂါထာ တရွာတပုဒ်ဆန်း ဆိုသလို…………..
ပန်းတနော်မုန့်ဟင်းခါးလည်း အမြင်မလှပေမယ့် စားလို့ ကောင်းမှကောင်း။
(ရွာသူားတွေကို သက်သေခေါ်လို့ ရတယ်။) :hee:
ဖျာပုံမုန့်ဟင်းခါး၊ တောင်ငူမုန့်ဟင်းတွေလည်း စားဖူးတယ်။
ဟင်္သာတသူားတွေကလည်း သူတို့ မုန့်ဟင်းခါးမှ ကောင်းသတဲ့။
မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသချက်နည်းတွေကတော့ ခပ်ဆင်ဆင် ဆိုပဲ။
အာတီဒုံ တို့ ဘက်က မုန့်ဟင်းငါးချက်နည်းကို ရှာနေတယ်။
ပုဇွန်ကြော်ထည့်စားတယ် ဆိုလား ဘာလားမို့၊.၊ဟီး
ဝါးခယ်မ ဘလော့က နေ ဝါးခယ်မ မုန့်ဟင်းခါး ကို မ လာကြောင်းးး
ကရင် တပင်တိုင် မုန်.ဟင်းခါး
မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်းအချို.ဒေသတွေမှာတော့ မုန့်ဟင်းခါးဟု ခေါ်လေ့မရှိဘဲ မုန့်တီဟု ခေါ်လေ့ရှိပါတယ်…….
ရခိုင်မုန့်တီဟုသာ သတ်မှတ်ခေါ်ဆို ပြီး ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ် စသည့် ဒေသတို့တွင်လည်း
မုန့်ဟင်းခါးဟုခေါ်ဆိုလေ့ မရှိပဲ မုန့်တီဟုသာ သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုလေ့ရှိသည်။ ထိုဒေသအခေါ်အရတော့
ယနေ့ချက်မည့် ဟင်းလျာက ကရင်တပင်တိုင်မုန့်တီဖြစ်ပါတယ်။
ကရင်လူမျိုးအများစုကတော့ ငါးပိကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြ၍ ၎င်းတို့ချက်သည့် ဟင်းလျာသည်
ငါးပိနံ့လေးအနည်းငယ်ကဲ၏။ငါးပိနံ့အား မနှစ်သက်ပါက မိမိဟင်းလျာတွင် လျှော့ချက်နိုင်ပါသည်။
သို့မဟုတ် မျှင်ငါးပိကိုသာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကရင်ဟင်းခါး အရသာစစ်စစ်ကို သုံးဆောင်ချင်လျှင်တော့
ကရင်တပင်တိုင်မုန့်တီသည် ဆီ လုံးဝမသုံးသည့် အတွက်ကြောင့် ဆီရှောင်သူများနှင့်လည်း အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
၁။ ငါး တစ်ဆယ်သား
၂။ငါးပိ ရည်ကျို အစိမ်း (မချက်ရသေးသော) စားပွဲတင်ဇွန်း တစ်ဇွန်း
၃။မျှင်ငါးပိ စားပွဲတင်ဇွန်း တစ်ဇွန်း
၄။စပါးလင် ၂ ပင်
၅။ ကြက်သွန်နီ ၂၀သားခန့်
၆။ငရုတ်သီးစိမ်း နို့ဆီဗူးတစ်ဝက်ခန့်(အစပ်ကို မိမိစိတ်ကြိုက်အနေထားသာ သုံးပါ)
၁၀။ မုန့်ဟင်းခါး ဖတ်
ဒီနေ့ ငှက်ပျောအူတိုင်လေး ဝယ်၍ရသောကြောင့် ငှက်ပျောအူတိုင်လေးကို ပါးပါးလေး လှီးကာ
ဆားအနည်းငယ် ထည့်ထားသော ရေထဲစိတ်၍ အသင့်ပြင်ထားတယ်။
၁။ငါးများကို အညစ်အကြေးစင်အောင်ဆေးကာ နနွင်း၊စပါးလင် ၊ မျှင်ငါးပိ၊ငါးငပိ တို့နှင့်အတူ ရေအနည်းငယ်ထည့်၍
ငါးများ ကျက်ကာ ပျော့ပျောင်းနူးညံ့လာလျှင် အိုးပေါ်မှ ဖယ်၍ အရေစစ်ကာ အသားများနွှင်ပေးရပါမည်။
၂။ ငါးအသားနွှင်နေချိန်တွင် စောစောက ကျန်ရစ်ခဲ့သည့်ငါးပြုတ်ရည်ကို ရေထပ်ရောကာကြက်သွန်နီ၊
ငှက်ပျောအူများနှင့်မီးဖိုပေါ် ပြန်လည်တင်ထားကာ ချက်ပြုတ်ထားသည်။စပါးလင်အဟောင်းကို
ပြန်လည်မသုံးချင်လျှင် အသစ်တစ်ချောင်း ကို ထုချေကာ ထပ်ထည့်ထားလိုက်ပါ။
၃။ ငါးများနွှင်ပြီးသောအခါ ငါးအသားများကို ဟင်းရည်အိုးထဲသို့ ထည့်လိုက်ပါ။(ကြော်ရန်မလိုပါ)
၄။ငရုတ်သီးစိမ်း၊ကြက်သွန်ဖြူ၊ငရုတ်ကောင်းတို့ကို ထောင်း၍ အရည်ပွက်ပွက်ဆူနေသော ဟင်းရည်အိုးထဲသို့
ထည့်မွှေလိုက်ပါက ငရုတ်သီးစိမ်းနံ့သင်းသင်းနှင့် မုန့်တီရည်လေးရပါပြီ။
အပေါ့အငန်ကို မိမိစိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်ပြီးလျှင် ကရင်တပင်တိုင်မုန့်တီ(ခေါ်) မုန့်ဟင်းခါးလေး
ရွှေခယ်မဂ္ဂဇင်းထဲကစာအရတော့.. ရွှေခယ်သူားတွေက..၀ါးခယ်မမုန့်ဟင်းခါးကို.. ” တောချက်”လို့ပြောတာကြိုက်ပုံမရ…
ကျုပ်ကတော့.. တောချက်အမည်ပေးကမှ.. ဂုဏ်ရှိတယ်လို့ထင်…။
အိမ်ကလေဒီများ.. တောချက်ဆိုမှ.. ဆိုမှ.. တဲ့..
အဲ… ၀ါးခယ်မ မုန့်ဟင်းခါးချက်နည်းလေး သွားကူးပေးအုံးမှလို့တွေးပြီးဖတ်လာတာ သူတို့က ကိုယ့်ထက် ဦးနေပါရော့လား။
မြို့တွေရဲ့ နံနက်ပိုင်းအဓိကအစားအစာတွေရှိကြတယ် ပုသိမ်ဆိုကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ ..မြိတ်ဆို ကတ်ကြေးကိုက် ဓနုဖြူဆိုထမင်းပေါင်း အဲ့ဒီလိုအစားအစာထဲမှာ ဟင်္သာတရဲ့နံနက်ပိုင်အစားအစာမုန့်ဟင်းခါး ကအဓိကအစားအစာပါ..အလှူတွေမှာချက်တဲ့ တပင်တိုင်မုန့်ဟင်းခါးကို စားဘူးတဲ့သူတွေကိုမေးကြည့်လိုက်ပါ ဘယ်မြို့နဲ့မှမတူအောင်ကောင်းကြောင်းပြောပြပါလိပ်မယ် …
မုန့်ဟင်းခါးသည်ကြီးတော့ အသေရရ အရှင်ရရ ..!!!
မွင်းငါးကို ခွက်ပေါက်အောင်ကို စားထားတာရော်..
သများမွင်းငါးချက်နည်းက လွယ်မှလွယ်ပဲ.. ရေနွေးအိုးဆူအောင်တည်..ကြက်သွန်နီလေးစိတ်စိတ်ပစ်ထည့်… သူများဆီသတ်ထားတဲ့ငါးပစ်ထည့်.. ငြုပ်ကောင်း.သွန်ဖြူထောင်းထားတာပစ်ထည့်.. ဆူရင်စားလို့ရပြီ.. ဘာအမှုန့်မှမထည့်… ငါးများများထည့်တယ်.. မွင်းခါးငပျင်းချက်..
စပါးလင်မထည့်ဖူးပေါ့…။ ငပျင်းချက်က.. နံမှာ..
အာ့ မွင်းးးငါးးးလို့ ခေါ်လားး ဟင်
အာ့ငပျင်းမွင်းခါး​လေ…. စား​ကောင်းတယ်​.. အထင်​မ​သေးနဲ့.. အစာပလာ​တွေကလည်းအုန်​ထည့်​.. အ​ကြော်​..ငါးဖယ်​..ဘဲဥ
.. မနံဘူး..ဆီသတ်​ထဲက အကုန်​ထည့်​သတ်​ပြီးသား.. စားချင်​ မပင်​မပန်းချက်​စားလို့ရ​အောင်​.. အများကြီးဆီကြိုသတ်​ထားတာ​လေ..
မွင်းငှား များဗျာ ..ခဲ့ရခဲ့စစ် ရယ်…
နှစ်ပေါက်အောင် တနေ့တဆိုင် လိုက်ကျွေးလို့ရသဗျ….
မွင်းးငါးးး ကို နှစ်ပေါက်အောင် စားးနိုင်ပါတယ်
ခေါင်းးးပေါက်တော့ မခံနိုင်ဘူးးး(ညည်းးးနဲ့ သွားးးလို့ နာ့ အချာင် အရိုက်ခံရ ဘိုလုပ်မလဲ)
မုန့်ဟင်းခါးဆို ဘာလာလာ ဒေါင်းတယ်
(ပြန်လာရင် သွားစားကြမလား :loll: )
ကိုယ်တွေနေတဲ့နေရာက ကုလားပဲ မရှိလို့ စားတော်ပဲနဲ့ချက်စားရတယ်..
သများးး တခေါက် တခေါက် ပြန်ရင် ပဲမျိုးးးစုံပါ ပြန်သယ်သတော့…
ကိုယ်ပြည်က ပဲ မှ ချိုတယ်ထင်..!!!
ငမ့် တူညားချာလုံးပေါင်းအမှားဒေကိုပြင်ဘူး လူဇိုး ယောက်ခမွကတော့ မွင်းငါးကို ရှာလကာရည်နဲ့မှစားတယ်
အနော် ပြင်ရင် ယောက်ခမွလေသံပျောက်သွားးးမှာစိုးးလို့
ဒီလိုရှိတယ်ကေ။ မုန့်ဟင်းခါး ဟင်းရည်က သိပ်ကောင်းသွားပြီဆိုရင် တခြား အဆာပလာ တွေ မလိုတော့ဘူး။ ဘဲဥတို့၊ ငါးဖယ်တို့၊ အကြော်တို့ပေါ့။ ဟင်းရည်သိပ်ကောင်းပြီဆိုရင် အဲဒါတွေ မျက်စိရှေ့ရှိနေရင်တောင် ထည့်စားလို့ မရတော့တာ။
အပေါ်က ချက်နည်းတွေနဲ့ ကွန်မင့်တွေမှာ အမ လိုက်ဖတ်ကြည့်တော့ အမချက်တဲ့နည်းကို မတွေ့ဘူး။ အဲဒါကတော့ ဟင်းရည်အိုးထဲကို ဘဲဥ ၂လုံးလောက် ခေါက်ပြီး ဒီတိုင်းအစိမ်းထည့်လိုက်တာ။ ဘဲဥကို အလုံးလိုက် မပြုတ်ဘူး။ ဒီတိုင်း အစိမ်းဖောက်ထည့်တာကို ပြောတာ။ ဘဲဥကို ပြုတ်ပြီးမှ ပါးပါးလှီးထည့်ရင် ဘဲဥစော်နံတယ်။
အမချက်တဲ့ ဖျာပုံမုန့်ဟင်းခါး နည်းကို ပြောပြမယ်။ အိမ်ချက်ဆိုတော့ အလွယ်သုံးတဲ့ကိစ္စ မရှိဘူး။ ဥပမာ အရောင်တင်မှုန့် မသုံးဘူး။ တကယ့် ငြုပ်ပွကိုပဲသုံးတာ။ ကုလားပဲနေရာမှာ ရွှေကြည်မှုန့် မသုံးဘူး။ ဖျာပုံမြို့မှာ မုန့်ဟင်းခါးသွားစားရင်တော့ ဖျာပုံမုန့်ဟင်းခါး စစ်စစ် ဘယ်စားရမလဲ။ အခု အမပြောမှာက တကယ့်ဖျာပုံမုန့်ဟင်းခါး စစ်စစ်။
.(၁) ကုလားပဲ ၁၅ကျပ်သားကို နူးအောင်ပြုတ်ပြီး ထောင်းချင်လည်းထောင်း၊ မထောင်းနိုင်ရင် ဘလင်ဒါသုံးပါ။
.(၂)ဆန်မှုန့် အကျက်မှုန့်နဲ့ ပဲမှုန့် အကျက်မှုန့် (တချို့က အစိမ်းမှုန့်သုံးတယ်၊ အစိမ်းမှုန့်သုံးရင် နံတယ်) ကို အသီးသီး ရေစိမ်ထားပါ။
.(၃) ငါးကြင်းလို ဈေးကြီးတဲ့ငါး သုံးစရာမလိုဘူး။ ငါးမြစ်ချင်း ၄၀သားလောက်ဆိုရင် ဖြစ်တယ်။ ငါးမြစ်ချင်း ကိုပြုတ်တဲ့အခါ ငါးတုံးကြီးကို မမွှမ်းပါနဲ့။ မွှမ်းလိုက်ရင် ငါးရိုးတွေပြတ်ကုန်တော့ ငါးအရိုးနွှာတဲ့အခါ လက်ဝင်တယ်။ ငါးရိုးမစင်မှာ ကြောက်ရတယ်။ ငါးတုံးကြီးကို ဒီတိုင်းထည့်ပြီး ရေထည့်၊ ငြုပ်ပွ ၄ တောင့်လောက်ကို အညှာမခြွေဘဲ ရေဆေးပြီးထည့်၊ ဆနွင်းမှုန့်၊ ဂျင်းများများ၊ ငံပြာရည် များများ ထည့်ပြီး ငါးနူးအောင်ပြုတ်ပါ။ နူးရင် နွှာထားပါ။ အရိုးတွေကို ထောင်းပြီးစစ်တာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့။ effort ဒီလောက် မသုံးသင့်လို့ပါ။
.(၄) စပါးလင် ၄ပင်လောက်ရဲ့ အနုပိုင်းကို ဓားနဲ့ စိပ်စိပ်လှီးပြီး သူ့ကို အရင်ထောင်း၊ သူက အမာဆုံးမို့လို့။ စပါးလင်ညက်ပြီဆိုမှ စောစော ငါးပြုတ်အိုးထဲက ငြုပ်ပွနဲ့ ဂျင်းကို ထည့်ထောင်း။ ၃မျိုးစပ်နော်။ စပါးလင်၊ ဂျင်း၊ ငြုပ်ပွ။
.(၅) ငရုတ်ကောင်းနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ က တစ်ပုံထောင်း။ ၂မျိုးစပ်။ ငရုတ်ကောင်းက အစေ့ သုံးဆယ်လောက်၊ ကြက်သွန်ဖြူ က ဥသေး ၅လုံးလောက်။
.(၆) အိုးကြီးထဲမှာ ဆီဇွန်းကြီး ၂ဇွန်းထည့်၊ ဆီကျက်ရင် ဆနွင်းရယ်၊ စောစောက ၃ မျိုးစပ်ကိုထည့်ပြီး ဆီသပ်။ ပြီးရင် အရင်ဆုံးထည့်ရမှာ ဆန်မှုန့် ပါပဲ။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ အားလုံးပြုံထည့်လိုက်ရင် ဆန်မှုန့်က ပွလာဖို့ ကြာတယ်။ မပွခင်မှာ မမွှေနိုင်ဘဲ အိုးကပ်သွားတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဆန်မှုန့်ကို အကြာကြီးချက်ရတယ်။ ဆန်မှုန့် အလုံးလေးတွေ မမာဘဲ ပွတက်လာပြီဆိုမှ ထောင်းထားပြီးသား ကုလားပဲကိုထည့်။ ကြက်သွန်နီ ဥသေးအလုံးလိုက် ကြိုက်သလောက်ထည့်။ အိုးပွက်ပွက်ဆူရင် ငါးနွှင်ထားပြီးသားထည့်။ စောစောက ပြုတ်ထားတဲ့ ငါးပြုတ်ရည်ရယ်၊ ကုလားပဲပြုတ်ရည်ရယ်၊ ပဲမှုန့်ရေစိမ်ရယ် ကို ပေါင်းထည့်ပါ။ ပြီးမှ ၂မျိုးစပ်ကို ဆီမသပ်ဘဲ ဒီတိုင်းထည့်တာ။ ပြီးရင် ဘဲဥ ၂လုံး ခေါက်ပြီး အစိမ်းထည့်။ အိုးပွက်ပွက်ဆူတုန်းထည့်ရတယ်။ မဟုတ်ရင် ပျစ်ခဲသွားမှာစိုးလို့။ ဆား၊ ငံပြာရည်၊ အချိုမှုန့် နည်းနည်းလေးတော့ သုံးပါ။
အဲဒီလိုချက်နည်းမျိုးက ငှက်ပျောအူ မပါရင်ပိုကောင်းတယ်။
လူအတော်များများက ဘဲဥ အစိမ်းဖောက်ထည့်တဲ့ကိစ္စကို မယုံနိုင်ကြဘူး။ တစ်ခါမှ မကြားဖူးဘူးလို့ ပြောကြတယ်။ ကေလည်း လုပ်မယ် မထင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ စွန့်စွန့်စားစား လေးပေါ့။ တစ်အိုးလုံး မပစ်ရဘူး စိတ်ချ။ ဟင်းရည်သိပ်ကောင်းလွန်းလို့ တခြား ငါးဖယ်တို့ ဘဲဥတို့ လုံးဝထည့် မစားနိုင်တော့ဘူး။
အာမီရမ် လေးပက်လောက် ထည့်ရင်ကောအန်တီ…..
သူယို့ပြောတာတော့ …သံပုရာသီး တလုံးလောက်ပါ ကိုတီးလုံး ချွတ်ထည့်ပီး အနံ့သတ်သေးတာတဲ့…
ကိုယ့် အမ ရှားးးရှားးးပါးးးပါးးး ဝင်ချက်တာမို့ စိမ်းးးလိုက်ကြောင်းးး
အဖိုးးး အမြဲပြောတဲ့ ဖျာပုံ မုန့်ဟင်းးးခါးးးးး.
တဖြည်းဖြည်းနဲ့.. မုန့်ဟင်းခါး အန်ဆိုက်ကလိုပီးဒီယားဖြစ်လာပြီ..။
စုံသွားအောင်.. ဂျပန်ဟင်းချက်တဲ့အခါ.. သိပ္ပံနည်းကျတဲ့.. အရသာထည့်နည်းစပ်နည်းလေးပြောပြမယ်..။
ဆ၊ရှိ၊စု၊ဆဲ၊ဆော၊ (Sa(さ) Shi(し) Su(す) Se(せ) So(そ)) အစဉ်အတိုင်းထည့်ပါတဲ့..။
(SATO (砂糖) Sugar, SHIO (塩) Salt, SU (酢) Vinegar, SEUYU (醤油) Soy Sauce, MISO (味噌) Miso)
သကြား(ချို)၊ ဆား(အငန်)၊ ရှလကာရည်(အချဉ်)၊ ပဲငံပြာရည်(အဆိမ့်)၊ ဆန်ပဲနှစ်(မိဆော) အစဉ်ပေါ့..။
ဟင်းချက်ချိန်.. အစဉ်အတိုင်းမဟုတ်ပဲ.. ဖေါက်ထည့်ရင်.. အချိုးတွေ ဂရမ်အတိအကျညီစေဦး.. အနံ့..အရသာပြောင်းပါတယ်..။
ဒါကြောင့်.. ချက်ပြုတ်ခြင်းမှာ အနုပညာရှိတယ်ဆိုကြတာ…..။
The order is based on some experiments and practical food senses :
1. Sweet taste is difficult to penetrate, adding sugar first is usually advisable and allow more flexibility adjust the sweetness with other ingredients. If salt or soy sauce is added before sugar, it becomes very difficult for the sweet taste to seep through the food.
2. Salt is added at the early stage of cooking because of its strong permeation and high absorption nature. It is not only for flavoring but to pull moisture from vegetables and get rid of the smell in fish. It’s often used in defining the taste of the cooking.
3. Having vinegar come after salt becomes important, especially for vegetables because the vinegar will not seep in if there is too moisture in the vegetables.
4. Soy sauce and miso come last because both are fermented foods and are most susceptible to being affected by heat.
You might ask, “What about mirin(သကာရည်) or sake(အရက်)?”
If you are adding sake for additional flavoring, it goes in before sugar. And for mirin,atype of rice wine similar to sake, is needed it will be added last after miso. Most sauces use at least three ingredients as opposed to all and there are regional variations to their use.
If you stick to this order, all your flavours will haveachance to become their richest. There are both practical reasons and chemical related reasons for this, and it is amazing how muchadifference it will make to your cooking.
Feel free to share your thoughts and let us know how it goes with your Japanese cooking!
ထင်တာပြောရရင်.. မုန့်ဟင်းခါးအတွက် ငါးပြုတ်တာမှာ.. အရက်နည်းနည်းထည့်ပြုတ်လိုက်ရင်.. ငါးညှီနံ့လျှော့သွားမယ်ဖြစ်ပြီး.. အရက်အငွေ့ပြန်ရင်ကျန်တဲ့သကာရည်ကနေ.. အချိုဓာတ်ပိုထွက်လာမယ်ဖြစ်ပါတယ်..။
မြန်မာတွေဟင်းချက်ရာမှာ.. ဘိုးတော်ဘုရားလေးဖက်ထောက်ခောတ်က.. အတိုင်း.. လုံးထွေးထောင်း..။ ဆီသတ်၊ အချိုမှုန့်ခတ်..စသဖြင့် ဒုံရင်းကတက်မလာတာမဖြစ်ပဲ.. အရက်..ဟင်းချက်ဝိုင်ကိုသုံး.. အချိုမှုန့်လို ကမ်မစ်ကယ်တွေလျှော့သင့်နေပြီလို့ထင်..။
အကင်တွေကိုလည်း.. မြန်မာ့နေ့စဉ်အစားအစာထဲဝင်လာအောင် လုပ်သင့်နေပြီလို့ထင်..။
အရက်ပါမှာမို့.. ငါးပါးသီလဆိုပြီး အော်နေကြသူများကိုတော့.. မကြွေးနဲ့ပေါ့..။
အရက် ကို စတင် သုံးးးစွဲ ချက်ပြုတ်နေပါပြီ…
ဒိုက်စော်နံတဲ့ ငါးး ပုစွန်လည်းး အရက်ထည့်ပြီးးနယ် ကြော်ပြုတ်ချက် တာ အနံ့ ပျောက်ကြောင်းးးးးး
ပင်လယ်ငါးပေါတဲ့ ရခိုင်ဘက်မှာတော့ ရခိုင်မုန့်ဟင်းခါးဆိုပြီး မရှိတာ ထူးဆန်းတယ် …
သူတို့မှာ ရခိုင်မုန့်တီပဲ ရှိတယ် …
မြိတ် မုန့်ဟင်းးခါးး နည်းးး လိုချင်တယ်
အနော်ကတော့ ကောက်ညှင်းပေါင်းထည့်စား… ဌက်ပျောအူတိုင်တွေစားတဲ့ မြိတ်သားပါဗျိူးးးးးး….
ငါးဖိန်းနဲ့စပါးလင်ရောပြုတ်။ ပြုတ်ရည်ကို အရည်ကိုထပ်ပွားဆူအောင်တည်။ ဆန်ကိုလှော်ပြီးညက်အောင်ထောင်း။ အရည်အိုးထဲ ငါးနွှင်ထားတာနဲ့ ဆန်လှော်ထည့်ဆူအောင်တည်။ ဆူရင်ကြက်သွန်မိတ်ခပ်များများထည့် အရသာမြည်း စားလို့ရပြီ။
ကျုပ် ဒက် ပေးးမယ်ဆိုတဲ့ အင်းးး မွင်းးငါးးး
မြောင်းမြ မုန့်ဟင်းခါးရော ဘယ်လို ချက်ရလဲ ဟင်… ရန်ကုန်မှာတော့ အောတိုက်ပဲ ဆိုင်တွေ..
မြောင်းမြ မုန့်ဟင်းခါး -လမင်း
မုန့်ဟင်းခါးဆို ငါးခူပဲ သုံးပါတယ်.. ဂျင်း စပါးလင်. ငါးပြာရည်. နနွင်ရောပြုတ်ပါတယ်။။။ ၁၅ မိနစ်လောက်ဆိုရပေမဲ့ လမင်းတော့ မိနစ် ၂၀ လောက်ထားလိုက်တယ်။။
ငါးကိုအရိုးထုတ် ကြက်သွန်နီ ဖြူ နဲ့ ဆီသတ် နနွင်းထည့်ပါတယ်…
အရောင်က အ၀ါရောင်ပေါ့.. ဆီသက်ပြီ ငါးနွှင်ထားတာ ထည့်ပါတယ်..ငါးပြုတ်ရည်ဆူလာရင် ငါးဆီသတ်ထားတာ ထည့်လိုက်ပါတယ်။။ ၁၅ မိနစ်လောက်ကြာရင် ဆန်မှုန့် ရေဖျော်ထည့်ပါတယ်။။ နောက်ထပ် ၁၅ မိနစ်လောက်ကြာရင်တော့ငရုပ်ကောင်းရယ် ကြက်သွန်ဖြူရယ်ထောင်းထားတာကို ထည့်ပါတယ်။။
၁၅ မိနစ်လောက်ဆိုစားလို့ရပါပြီး လမင်းတော့မီးအေးအေးလေးနဲ့ ထားလိုက်တယ်.
ပွဲပြင်ထားတော့ရန်ကုန်နဲ့ မတူဘူး ။။။ ပဲမှုန့် ဆီကျက် ထည့်ကြပါတယ်။။ ငရုပ် နံနံပင်.. ပဲသီးစိမ်းတို့ ထည့်စားတတ်ကြတယ်။။
မုန်းဟင်းဂါးမှာ ငါးမလောက်လို့ ဝက်သားထည့် ချက်ဖူးရား..
ကျန်တဲ့ အစာ တွေကို ဒီလောက်မတမ်းတပါ။
ဒါပေသည့် မွန်းခါး တော့ စားချင် တယ်။
ချက်စားဖို့ ဟာလဲ တစ်ခါမှ မကြိုးစား ဖူးဘူး။
ရယ်ဒီမိတ် အထုပ် လက်ဆောင်ရမှ အာသာပြေ စားရတာ။
တစ်ရက်တော့ ဒီထဲ က နည်း တွေ ထဲ က တစ်ခု ကို ချက်ကြည့် မယ် မို့ အားခဲ ထားပါတယ်။
စပါးလင် ရတယ်။ ငါး သာ ခက်တာ။ အဲဒါက အဓိက ကို ဆိုတော့ ခက်ရော။
ငါးသေတ္တာ နဲ့ ချက်ဖူးသူများ ရှိလား မသိ။
ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ပုံလေး ကြည့်ပြီး ဘဲ အလွမ်းသည် လုပ်လိုက်ပြီ။
ကျေးဇူးပါ ဇီကလေး နဲ့ မွန်းခါးဆရာ/မ များ ရေ့။ :))
ဆယ်လမွန်ငါး အရေပြားနဲ့ ဆူးတောင်တွေဖယ်ပြီး …
အသားချည်းသက်သက်နဲ့ချက်ရင်… မုန့်ဟင်းခါး ဖြစ်ပါတယ် …
ငါးသေတ္တာနဲ့လည်း ချက်ဖူးပါ့ … ထိုင်းကလာတဲ့ ဗူးတွေနဲ့ ချက်လို့ရပါတယ် …
ရေစင်အောင်ဆေးပြီး စပါးလင် ဂျင်း ကြက်သွန်ဖြူနိုင်နိုင်နဲ့ ဆီသတ်ချက်ပါ …
ဇီဇီ ရှာလာတာက ၀ါးခယ်မ မြို့ပေါ်က ချက်တာနဲ့ မတူလို့ ထပ်ရှာလာပေးပါတယ်။တောချက်လို့ ပြောချင်လည်း ပြောပါ။
ပုံတွေနှင့်တကွ ကြည့်ချင်ရင် ဒီနေရာမှာ သွားကြည့်ပါ၊
မုန်.ဟင်းခါးကို တစ်နိုင်ငံလုံး နေရာအနှံ. လူမျိုးအစုံ ဘာသာအကုန် ချက်ကြ စားကြ နှစ်သက်ကြ သော်လည်း ဒေသအလိုက် ရရှိနိုင်သော ကုန်ကြမ်း နှစ်သက်လေ.ရှိသော အရသာ တို.ကိုလိုက်ပြီး ပြုပြင်ချက်လုပ်ပုံများ ကွာသွားရာမှအစပြုကာ အနံ. အရသာ အခေါ်အဝေါ်ကအစ အနည်းငယ်တော.ကွာသွားကြသည်။
မော်လမြိုင် ရေစိမ်မုန်.ဟင်းခါး က ဆန်မှုန်. ငှက်ပျောပင် စပါးလင်.နှင်.ချက်သော်လည်း ငြုပ်ကောင်းမသုံး ၊ဘိတ် ( မြိတ် ) မုန်.ဟင်းခါးသည် ပင်လယ်ပိုင်းဒေသထွက်ဖြစ်သဖြင်. ငါးပိအနည်းငယ်သုံး၍ချက်လေ.ရှိပြီး ဟင်းရည်ပျစ်ကာ ငှက်ပျောခေါင်း ( ငှက်ပျောအူ မဟုတ်ပဲ အခြေထိပ်ဘက်ရှိ အသား) လှိုင်လှိုင် ထည်.ချက်လေ.ရှိသည် ။ ရခိုင်မုန်.ဟင်းခါး (မုန်.တီ) ကျတော. (၇နိုင်လျှင်)ပင်လယ်ငါး တစ်မျိုးဖြစ်သော ငါးရွှေ ကိုတန်ဖိုးထားသုံးပြီးမျှင်ငပိကလည်း မပါမဖြစ် ။ကရင် မုန်.ဟင်းခါးကျတော. ငါးပိရည်ကြိုနှင်. ငြုပ်သီးစိမ်း သုံး၍ချက်လေ.ရှိကြသည် ။အင်းလေးမုန်.ဟင်းခါးကျတော. ငါးဖိန်း ကိုအသုံးပြုပြီး ပဲမှုန်.နှင်. ချက်လေ.ရှိသည် ။ အညာမုန်.ဟင်းခါးကျတော. ကုလားပဲ ကိုအားပြုပြီး ချက်လေ.ရှိကာ အချို. အညာအရပ်ဒေသများဆိုလျှင် မုန်.ဟင်းရည်ကို ဆိတ်သားနှင်.ပါ ချက်လေ.ရှိကြသည် ။ ဧရာဝတီ တိုင်းအတွင်း ၌ ပင်လျှင် အထက်ဘက်ပိုင်း များက ကုလားပဲ ၊ဂျင်း စသည်တို. အသုံးပြုကြပြီး အောက်ဘက် ပင်လယ်ပိုင်းများက စပါးလင် နှင်. ငါးနိုင်းချင်း ထည်.သုံးကြသည် ။ ရန်ကုန်မုန်.ဟင်းခါးကတော. ပဲ ၊ရွှေကြည်မှုန်. ၊ငါး (များသောအားဖြင်. ငါးမြစ်ချင်း ၊ငါးကြင်း အချို.ကတော. ငါးခူ) ၊ဂျင်း ၊စပါးလင် တို. အသုံးပြု ကြသည် ။ မြို.လေး၏ မုန်.ဟင်းခါးကတော. ဆန်မှုန်. ၊ငံပြာရည် ၊ကြက်သွန်ဖြူ ၊ငြုပ်ကောင်း ၊ငါး (ငါးကျီး ၊ငါးခူ ) (ပုဇွန်ပေါသော အချိန်ဆိုလျှင် ပုဇွန်) အသုံးပြုချက်လေ.ရှိကြသည် ။ပုဇွန်ဥ ပေးသော အချိန်ဆိုလျှင်တော. ဘာနှင်.ချက်ချက် ထိုဟင်းရည်ထဲ ပုဇွန်ဥ ခပ်လိုက်လျှင် သဘာဝဆန်လွန်းသော အချိုက မမေ.နိုင်စရာ အရသာ တစ်ခု……….
အချို.ကတော. ၀ါးခယ်မုန်.ဟင်းခါးချက် ၊မြောင်းမြမုန်.ဟင်းရည်ချက် ပုံတို.ကိုတောချက်ဟုခေါ်လေ.ရှိသည် ။လက်ခံပါသည် တောဆိုသည်က လတ်ဆတ်သော အသား .ငါး ၊လတ်ဆတ်သော အသီးအနှံ တို.ဖြင်. သဘာဝအရောင် အနံ. အရသာတို.ကို အလေးထားပြီး စီးပွးရေးဆန်လွန်းသော လောဘများလွန်းသော ဖန်တီးမှု မဟုတ်ပဲ စေတနာဖြင်.ချက်လုပ်သောကြောင်. ကျန်းမာရေးအရ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးမရှိသလို စီးပွားရေးအရ အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူစားသုံးနှိုင်သော နှုံးထားသာ ရှိနေပါသည် ။တောချက်ဟုခေါ်ကြသော ထိုဝါးခယ်မမုန်.ဟင်းခါး ကိုပင် ၇န်ကုန်မြို.ကြီးဆီက နာမည်ကြီးဆိုင်တို.က နာမည်တပ်ရောင်းချနေကြရသည်ကို တွေ.ရသောအခါ………………………….
အကယ်၍များ ၀ါးခယ်မ မုန်.ဟင်းခါးကို ၀ါးခယ်မအရသာစစ်စစ် စားချင် ၊၀ယ်ဖို.ကလည်း အခက်အခဲဖြစ် နေပါလျှင်တော. ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ် ချက်လုပ်ကြည်.နိုင်ပါသည် ။ သုံးရသော ကုန်ကြမ်း ၊ထည်.သွင်းသော အချိုးအစား တို.အပေါ် မူတည်၍ အရသာ အနည်းငယ် အပြောင်းအလဲ ရှိကောင်းရှိမည် ဖြစ်သော်လည်း စားလိုက်မိသည်နှင်. တော. ၀ါးခယ်မ မုန်.ဟင်းခါးဟု လက်ခံပါလိမ်.မည် ။ မူကွဲအမျိုးမျိုး ရှိသည်.အနက် ရရှိသော နည်း တစ်နည်းကိုဖော်ပြအပ်ပါသည် ။
ငါးကျီး (သို.)ငါးခူ (မရနိုင်လျှင် ငါးကြင်း ၊ငါးမြစ်ချင်း) ၂၅ ကျပ်သားခန်.
ကြက်သွန်နီ အနေတော် အရွယ် ၁၅ လုံးခန်.
ဘဲဥ ပြုတ်ပြီးသား ၃ လုံး
ငြုပ်ကောင်း အစိ ၁၅ လုံး ခန်.
မုန်.ဟင်းခါးဖတ် နှင်. ညှပ်ခေါက်ဆွဲဖတ် ၅၀ သားစီ
၁ ။ပထမဆုံး ငါးကိုသန်.စင်အောင်ဆေးကြော ပြီး အိုးတစ်လုံးတွင် ရေမြုပ်ရုံထည်. ၊ ငါးငံပြာရည်စစ်စစ် ထည်.၊ဆနွင်းစစ်စစ် အနည်းငယ် ထည်.ကာကာ ကျက်သည်အထိပြုတ်ရပါမည် ။အချို.ကတော. ထိုသို.ပြုတ်ရာတွင် စပါးလင် ထည်.သုံးပြီး အချို.ကတော. မထည်.ပါ ။မြို.လေးတွင်မူ ငါးကျီး ၊ငါးခူ ကသာ စံဖြစ်သော်လည်း ယခုကတော. အလွယ်တကူ ရနိုင်သော ငါးကြင်းကိုသာ အသုံးပြုထားပါသည်။
၂ ။ ထိုသို.ပြုတ်ပြီးပါက ငါးအား အရိုးနွှင်ကာ အရိုးသပ်သပ် ၊အသားသပ်သပ် ပန်ကန်တစ်ခုအတွင်း ထည်.ထားရပါမည်။
၃ ။ ထို.နောက် ငါးပြုတ်ထားသောရေကို မီးဖိုပေါ်တင်ပြီး ဆူလာအောင်တည်ပေးရပါမည်။ထိုအချိန်တွင် နွှင်ထားသော အရိုးများကို ငြုပ်ဆုံ တစ်ခုအတွင်းထည်.ထောင်းကာ အရိုးများဖယ်ပြီး ရလာသော အနှစ်ကို ငါးပြုတ်ရည်အိုးထဲ ထည်.ရပါမည်။
၄ ။ ထိုငါးပြုတ်ရေအိုးဆူမလာမှီ နွှင်ထားသော ငါးအသားများကို ဆနွင်းအနည်းငယ် ထည်.ပြီး ဆီသတ်ထားရပါမည် ။(အချို.ကတော. ထိုငါးများကို ဆီမသတ်ပဲ ငါးပြုတ်ရည်တွင်ထည်.မွှေကာ တိုက်ရိုက်ချက်လေ.ရှိပါသည် ၊ အကယ်၍ ငါးပြုတ်စဉ်က စပါးလင် ထည်.ပြုတ်လျှင် သိပ်ပြဿနာမရှိသော်လည်း ထိုစဉ်က စပါးလင်ထည်.မထားလျှင်တော. ငါးကိုဆီသတ်ချက်သည်က အညှီနံ. ကင်းစေပါသည် ။တစ်ခုသတိပြုရန်မှာ ငါးမြစ်ချင်း ၊ငါးကြင်းကဲ.သို. ကန်ငါးများသုံးချက်လျှင်တော. ဆီသတ်သည်က ပိုစိတ်ချရပါသည်)။ဆီသတ်ရာတွင် သဘာဝအရောင်အတိုင်းသာရှိနေရန် ဆနွင်းမှုန်.မှလွဲပြီး အခြားဘာမှသုံးစရာမလိုသလို ကြည်.ရုံနှင်. မနှစ်သက်ချင်စရာ ဟင်းရည်ပေါ်ဆီများဝေ.နေခြင်းမဖြစ်ဖို.ဆီကို အနည်းဆုံးလိုအပ်သလောက်သာထည်.ရမည်ဖြစ်ပြီး တူးနံ.မရှိအောင်တော.ဂရုစိုက်ရပါမည်။
၅ ။ ထို.နောက်အခွံနွှာထားသော ကြက်သွန်နီအနေတော်လေးများပါ အလုံးလိုက် (သို.)အခြမ်းလိုက် ဆီထည်.သတ်ပါ ။ထိုသို.ဆိထည်.သတ်သဖြင်. ကြက်သွန်နီသည် စိမ်းနံ. လုံးဝမရှိတော.သလို အချိုဓါတ်လည်း ပိုကဲစေပါသည်။
၆ ။ ငါးပြုတ်ရည်အိုးဆူလာလျှင် ထိုဆီသတ်ထားသော ငါးနှင်. ကြက်သွန်နီများ အိုးထဲလောင်းထည်.လိုက်ပါ ။ဆိုင်ဆိုလျှင်တော. ကြက်သွန်နီ ဥလိုက်တောင်းမည်.သူများအတွက် ကျက်သည်နှင်. ဖယ်ရန်လိုသော်လည်း အိမ်တွင်ချက်စားလျှင်တော. ထိုကြက်သွန်နီများပျော်ဝင်နေသော ဟင်းရည်က ပိုချိုသလို ပိုလည်း ပျစ်စေပါသည်။
၇ ။ ထိုအချိန်တွင် ၀ယ်ယူလာသော ဆန်ကျက်မှုန်.ကို ဒယ်အိုးအခြောက်နှင်. ဘာမှထည်.စရာမလိုပဲ မွှေးလာသည်ထိ လှော်ပေးရပါမည် ။ယခင်ကတော. မြို.တွင်ဆန်စိမ်းမှုန်.ကို ၀ယ်ကာ ကိုယ်.ဘာသာအိမ်တွင်လှော်ကြပါသည်။ယခုကတော. ဆန်ကျက်မှုန်.များက အလွယ်တူ ၀ယ်ယူရရှိနေပါသည်။မတူးစေရန် အထူးသတိထား၇မည်ဖြစ်သော်လည်း မွှေးလာသည်အထိတော. အချိန်ယူ၍ မီးအေးအေးနှင်.လှော်ပေးရပါမည် ။မွှေးလာသည်နှင်. ထိုဆန်အကျက်မှုန်.ကို ရေနှင်. ပျစ်ပျစ်ဖျော်ထား၇န် လိုပါသည်။
၈ ။ တည်ထားသော ဟင်းရည်အိုး ဆူလာချိန်တွင် ဖျော်ထားသော ဆန်ကျက်မှုန်.ရည်တို.ကို အိုးထဲထည်.ကာ ခဲမသွားစေရန်မွှေပေးနေရပါမည် ။ထိုဆန်ကျက်မှုန်.များ အပြီးတိုင်ပွလာသည်အထိ မီးပြင်းပြင်းနှင်. ပွက်ပွက်ဆူအောင် တည်ပေးရပါမည် ။
၉ ။ ထိုအချိန်တွင် ကြက်သွန်ဖြူများကို အခွံနွှာပြီးငြုပ်ဆုံတွင်ထည်.၍ ထိုက်သင်.သလောက် ကျေညက်နေအောင်ထောင်းထားရပါမည်။ကြိတ်ထားသော အရသာနှင်.ထောင်းသောအရသာ ယှဉ်စားကြည်.လျှင် မတူသကဲ.သို. ရှမ်းကြက်သွန်အမွှာအကြီးများနှင်. ဗမာကြက်သွန်ဖြူ အလုံးသေးများအနံ.အရသာကလည်း ကွာသဖြင်. ဖြစ်နိုင်လျှင် ဗမာကြက်သွန်ဖြူအသေးများကိုသာ စိတ်ရှည်ရှည်ထား ခွာပြီးထောင်းသင်.ပါသည်။
၁၀ ။ ဟင်းရည်အိုးကို ကြည်.လိုက်ပြီး ဆန်မှုန်.များကောင်းစွာပွနေပြီဆိုပါက ထောင်းထားသော ကြက်သွန်ဖြူများ ဟင်းရည်ထဲသို.ထည်.လိုက်ပါ ။ထို.နောက် ၀ယ်ယူထားသော ငြုပ်ကောင်း စိများကို မီးသွေးခဲပေးတင်ပြီး အနံ.မွှေးလာသည်အထိ လှိမ်.ပါ (မြို.လေးတွင်တော. မြေစလောင်းဖုံး (သို.)ဒါန်အိုးဖုံး တစ်ခုပေါ် ငြုပ်ကောင်းစိများတင် ထိုအပေါ်မီးသွေးခဲတင် ပြီးအနံ.မွှေးလာသည်အထိ လှိမ်.ပါသည်) ထိုကျက်သွားသော ငြုပ်ကောင်းစိများကို ပုလင်းတစ်ခုနှင်.(သို.)အဆင်ပြေရာ တစ်ခုနှင်. ကွဲကြေသည်အထိကြိတ် ပြီး ဟင်းရည်အိုးထဲထည်.ပါ(အသင်.ရောင်းသော လှော်ပြီးသား ငြုပ်ကောင်းအချို.မှာ အနံ.မကောင်းတတ်ပါ) ။
၁၁ ။လိုအပ်သော အချို အငန်တို.ကို ထည်.ပါ ။ငှက်ပျောအူကြိုက်လျှင် ငှက်ပျောအူ အနုလေးများထည်.ပါ (အချို.က ဟင်းရည်ကျဲသည်ဟုဆိုကာ ငှက်ပျောအူ ထည်.လေ.မရှိသလို အချို.ကလည်း လျှာယားသည်ဆိုကာ မကြိုက်သဖြင်. မထည်.ကြပါ)။
၁၂ ။ ပြုတ်ပြီးသား ဘဲဥများကို အစိတ်လေးများစိတ်ပြီး ဟင်းရည်ထဲထည်.ပါ (အစိမ်းကို ခေါက်ထည်.ပါက ဟင်းရည် ပျစ်သွားသလိုရှိသော်လည်း ပြုတ်ထားသော ဘဲဥအစိတ်များကသာ ၀ါးခယ်မမုန်.ဟင်းခါး အရသာစစ်စစ် ဖြစ်စေသလို မြုပ်တစ်ဝက် ပေးတစ်)က် ဘဲဥစိတ်များကသာ ၀ါးခယ်မမုန်.ဟင်းခါး မြင်ကွင်းအစစ်ဖြစ်သည်)အရသာ အနေတော်ဖြစ် ဟင်းရည်လည်း ပွက်ပွက်ဆူ ငြုပ်ကောင်းနံ.လေးလည်း လှိုင်လှိုင်ထွက်လာ ပြီဆိုလျှင်တော. စား၍ရပြီပေါ. ။
တကယ်က ၀ါးခယ်မ မုန်.ဟင်းခါး ပြင်ပုံကိုက အခြား မုန်.တို.နှင်.မတူပါ
စားပွဲဝိုင်းတွင် နံနံပင် ပုဂံ… ရှောက်သီးပုဂံ… ငံပြာရည် ပုဂံ… ငြုပ်သီးအလှော်မှုန်. ..ဆီချက်ပုဂံ.. ပဲမှုန်.ပုဂံ အကြော်ပုဂံ ..အလည်တည် ဟင်းရည် ပုဂံ စသည်တို.ပါမှ ဖွဲ.စည်းပုံအပြည်.ဖြစ်သည်။
မုန်.ဖတ်ပေါ် ကြက်သွန်အဖြူ၊အနီရောသတ်ထားသော ဆီချက်ဝါ၀ါလေးရွှဲရွှဲဆမ်း
ပဲမှုန်.လေး မုန်.ပေါ် အနည်းငယ်ဖြူး
ရှောက်သီး ၊နံနံပင် ၊ငြုပ်သီးမှုန်.၊ငံပြည်ရည် လိုအပ်သလိုထည်.
ပြီးမှ ဟင်းရည် ခပ်စီးစီးလေးဆမ်းပြီးနယ်
အလည်တည် ပုဂံ ထဲက ဟင်းရည်လေးခပ်သောက်………………
ကိုယ်.ဘာသာကိုယ် လက်တည်.စမ်းချင်သူများအတွက် မေးမြန်းလေ.လာ၍ရသလောက် ရေးပေးလိုက်ပါပြီဗျာ
မူကွဲတွေလည်း အမျိုးမျိုးရှိတာမို. လိုသလို စိတ်ကွန်.မြူးပြီး စမ်းသပ်ချက်ပြုတ်ကြည်.လို.တော. ရလောက်ပြီထင်ပါရဲ.
ဆက်စပ်ဖတ်ရှုရန် မြို.လေးနှင်. မုန်.ဟင်းခါး ယဉ်ကျေးမှု ( ၀ါးခယ်မ မုန်.ဟင်းခါး )
ကောင်းကောင်းလေး ပြန်စဉ်ပြီး ပို့ပေးမယ်။
***ရွာသူလေး ရဲ့ ရှားရှားပါးပါး (မွန်ရိုးရာ မုန့် ဟင်းခါး)**- ရွာသူလေးချမ်းချမ်း(ရင်တွင်းဖြစ်)
မုန့် ဟင်းခါးချက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့(ပမာဏတော့မပြောတော့ဘူးနော် စားမည့်လူဦးရေကိုကြည့်ပြီးကိုယ့်ဘာသာ ချိန်ထည့်ပါ။)
(၁) မုန့် တီဖတ်
(၂) ငါးရံ့ အလတ်စား တစ်ကောင်
(၃) ငှက်ပြောအူ၊ ငှက်ပျောခေါင်း နုနု
(၇) နနွင်းမှုန့် 
(၁၃) အချိုမှုန့် သို့ မဟုတ် သကြား
မုန့် ဟင်းခါးချက်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးက
ငါးရံ့ ပါပဲ။တစ်ချို့ ငါးခူနဲ့ ငါးကြင်း ကိုသုံးကြပေမယ့် ချက်ပြီးရင် အဆီဖတ်တွေ တ၀င်းဝင်းနဲ့ မို့ စားရတာ အီတယ်။ငါးရံ့ က အဆီနည်းပြီးအသားများတော့ အနှစ်များပြီးပိုချိုပါတယ်။တတ်နိုင်ရင် ငါးအရှင်သုံးတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ငါးလတ်မှ အနံ့ မွှေးပြီး အရသာ ချိုပါတယ်။ချမ်းချမ်းက တော့သေနေတဲ့အကောင်တွေထဲက ပါးဟပ်နီနီနဲ့ ဝမ်းဗိုက်သား ခပ်မာမာ လေးကို ရွေးပါတယ်။ငါးမလတ်ရင် ၀မ်းဗိုက်သား ပျော့ပြီး ပါးဟပ်တွေက မည်းမည်း ဒါမှမဟုတ် ဖြူနေတတ်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး အကြေးခွံ နဲ့ ဗိုက် ခွဲပြီးသား ငါးရံ့ ကို ၂ ပိုင်းပိုင်းပါ။ ပိုင်းထားတဲ့ငါးကို အညှီနံ့ ပျောက်အောင်ဆားနဲ့ နနွင်းနဲ့ သေချာပွတ်ပြီး ရေနဲ့ အညှီအချွဲစင်အောင်ဆေးပါ။ အဓိကကတော့ ပါးစပ်နဲ့ ပါးဟပ်ပါပဲ။ပါးစပ်မှာအချွဲတွေနဲ့ ပါးဟပ်မှာသဲတွေ ပိုများတော့ ဆားနဲ့ ပွတ်ပြီိး သေချာ ဆေးပါ။( ငါးရံ အူ၊ငါးခူမှာခေါင်း ငါးပြေမတစ်ကိုယ်လုံး ကောင်းတဲ့ )ငါးရံ့ အူကြိုက်သူများ အူထဲက သည်းခြေထုတ် အူကိုဓါးပါး မှမဟုတ်နှီးဖျားလေးနဲ့ သေချာခွဲပြီး ဆားနနွင်းနဲ့ ပွတ်ဆေးပါ။
ပြီးရင် ဆေးထားတဲ့ ငါးကို အိုးထဲထည့်ပြီး စပါးလင် သုံးလေးချောင်းကိုရေဆေးပြီး ဓါး ပြားရိုက်ထည့်ပါ။ ဂျင်းနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူ အနည်းငယ်ကို ရေစင်အောင် ဆေးပြီး အခွံမခွာပဲ ဓါးပြားရိုက်ထည့်ပါ။ ငါးပိစိမ်းစား၊ ဆားအနည်းငယ်၊နနွင်းမှုန့် အနည်းငယ်၊ဆီအနည်းငယ်၊အချိုမှုန့် အနည်းငယ် ထည့်ပါ။ (မြန်မာဟင်းချက်ရင် အချိုမှုန့် မပါပဲစားလို့ ဘယ်လိုမှ အရသာမ၇ှိပါဘူး) အချိုမှုန့် စားများရင်လဲ ရောဂါများပါတယ်ဒါ့ကြောင့် အချိုမှုန့် ထဲကို သကြားရောထည့်ထားရင်အကောင်းဆုံးပါပဲ။ လိုအပ်တာတွေထည့်ပြီးရင် သေချာနယ်ပြီး ရေကိုသင့်တော်သလောက် ချိန်ပြီးထည့်ပါ။ပြီးရင်အဖုံးဖုံးပြီး မီးဖိုပေါ်တင်ပါ။မီးအရှိန်သိပ်မပြင်းပါနဲ့ ။
ငါးအိုးတည်နေတုန်းမှာ ငှက်ပျောအူ နဲ့ ငှက်ပျောခေါင်း နုနုလေးကို ပါးပါးလှီးပါ။ ဇလုံတစ်လုံးထဲကို ရေထည့်ပြီး ဆားနဲ့ နနွင်း ထည့်ပါ။လှီးထားတဲ့ငှက်ပြောအူကို အဖန်ဓါတ်တွေ လျော့သွားအောင်ဆားရေနနွင်းရေနဲ့ စိမ်ထားပါ။
တည်ထားတဲ့ငါးအိုးဆူလာရင် ငါးကိုအိုးထဲ ဆယ်ထုတ်ပြီး ပုဂံတစ်ခုထဲမှာ အအေးခံထားပါ။ခုနက လှီးထားတဲ့
ငှက်ပျောအူကို ရေဆေးပြီး နောက်ထပ်အိုးအသစ်ထဲထည့် ဆီနည်းနည်းဆားနည်းနည်း ငါးပိစိမ်းစား နည်းနည်းထည့်ပါ.ခုက ပြုတ်ထားတဲ့ ငါးပြုတ်ရေ နည်းနည်းလောင်းထည့်ပြီး မီးဖိုပေါ်မီးမှန်မှန်နဲ့ တင်ထားပါ။
တစ်ချို့ ကတော့ ဟင်းရေအိုးထဲ တစ်ခါတည်း ရောချက်ကြပါတယ်။ငှက်ပျောဖတ်ကို လူတိုင်းမ ကြိုက်ကြပါဘူး။
ဒါ့ကြောင့် မရောပဲ သီးသန့် ချက်ပါတယ်။
ငှက်ပျော အူချက်နေတုန်းမှာ ခုနက အအေးခံထားတဲ့ ငါးလဲအေးလောက်ပြီမို့ ငါးအရိုးနွှင်လို့ ရပါပြီ။ အရိုးနွှင်ပြီးရင်တော့
ကျန်တဲ့အရိုးခေါင်းကို ဆုံထဲထည့်ပြီး ညက်အောင်ထောင်းပါ။ညက်သွားရင်တော့ ရေဖျော် အရိုးဖယ်ပြီး အရေသပ်သပ်
ခုမှ လိုက်ရှာရင်း တွေ့လို့ လာပေါင်းတာ။